တိရိစ္ဆာန်ပုံစံများမှအစ endophenotypes အထိ compulsive and impulsive အပြုအမူများကိုစစ်ဆေးခြင်း။
တိရိစ္ဆာန် & Models ကနေ Endophenotypes ရန်, compulsive နှင့် Impulse အပြုအမူစကားတွေ: တစ်ဦးက Narrative သုံးသပ်ချက် (2010)
Neuropsychopharmacology ။ ဖေဖော်ဝါရီ 2010; 35 (3): 591-604 ။
နိုဝင်ဘာ 25, 2009 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1038 / npp.2009.185
နောမိတစ်ဦးက Fineberg,1,2,3,* မာ့ခ် N ကို Potenza,4 ရှမွေလသည် R ကို Chamberlain,1,3 ဟဲလ်တစ်ဦးကဘာလင်,5 Lara Menzies,3 Antoine Bechara,6 ဘာဘရာ J ကို Sahakian,3 Trevor W Robbins,7 အက်ဒွပ် T က Bullmore,3,8 နှင့် အဲရစ် Holland9
နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal အာရုံကြောဆားကစ်၏ cortical ထိန်းချုပ်မအောင်မြင်မှုများထကြွလွယ်သောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူများကိုအထောက်အကူပြုစေနိုင်သည်။ ဒီဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်တှငျကြှနျုပျတို့အာရုံကြောဖြစ်စဉ်များ၏ရှုထောင့်ကနေကဤအပြုအမူစူးစမ်းနှင့်ဤအပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဖြစ်စဉ်များထိုကဲ့သို့သော obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD), obsessive-compulsive ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှင့်ကဲ့သို့သောချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်အဖြစ်စိတ်ရောဂါအထောက်အကူပြုဘယ်လိုစဉ်းစားပါ trichotillomania နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း။ ကျနော်တို့အဆိုပြုထား, striatum (caudate နျူကလိယ) medial မှ orbitofrontal cortex (OFC) မှသည်, အပြိုင်ပေါ် focussing, ဘာသာပြန်ချက်နှင့်လူ့ endophenotypes သုတေသနနှင့်လက်တွေ့ကုသမှုစမ်းသပ်မှုတွေပါဝင်, ဒေတာတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကနေ Function အသားအရောင်ခွဲခြားတွေ့ရှိချက်ကိုတင်ပြ, cortico-striatal အာရုံကြောများ , ထို anterior cingulate / ventromedial prefrontal cortex ကနေ ventral striatum (နျူကလိယ shell ကို accumbens) အားအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလှုပ်ရှားမှုမောင်းထုတ်ရန်, ထကြွလွယ်သောလှုပ်ရှားမှု, သူတို့အကြားအပြန်အလှန်မောင်းထုတ်ရန်အဆိုပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Impulse နှင့် compulsive တစ်ဦးချင်းစီ multidimensional ဖြစ်ဟန်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Impulse သို့မဟုတ် compulsive အပြုအမူတွေအဖြစ်ကွဲပြားအာရုံကြောအလွှာထပ်ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာကသတ်မှတ်ကြောင်းပုံမှန်မဟုတ်သော ventral ဆုလာဘ် circuitry ကပါဝင်ပတ်သက်သော်လည်း Trichotillomania, မော်တာ-ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ရောဂါအဖြစ်မပါဘဲရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ OCD ဖြစ်ကောင်း OFC-caudate circuitry ၏နှောင့်အယှက်အဖြစ်ကတခြားတိုကျရိုကျ, cingulate နှင့် parietal ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့, မော်တာ Impulse နှင့် compulsive ပြသထားတယ်။ serotonin နဲ့ dopamine နှစ်ဦးစလုံးထကြွလွယ်သောများ၏ရှုထောင့် modulate နှင့်တုံ့ပြန်နှင့်အမျှသေးအမည်မသိဦးနှောက်-based စနစ်များ compulsive ဤဆားကစ်ကိုဖြတ်ပြီးအပြန်အလှန်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ ပစ်မှတ်ထား neurocognitive တာဝန်များကို, အဲဒီ receptor-တိကျတဲ့ neurochemical စုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်ဦးနှောက်စနစ်များ application ကို neuroimaging နည်းစနစ်ဤမြေကွက်၌အနာဂတ်သုတေသနများအတွက်အလားအလာရှိသည်။
keywords: ထကြွလွယ်သော, compulsive, endophenotypes, serotonin, dopamine
ထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ် compulsive အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူလုပ်ရပ်များတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သပ္ပါယ်လူ့အပြုအမူကိုအထူးအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါသော်လည်း, ထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ် compulsive အပြုအမူ၏စည်းစနစ်တကျစည်းမျဉ်းဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် function ကိုရှိနိုင်ပါသည်။ Impulsivity ကို 'အတွင်းစိတ်နှင့်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုများသို့လျင်မြန်။ ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသောတုံ့ပြန်မှုများဆီသို့ ဦး တည်သောကြိုတင်ခန့်မှန်းမှု' ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ချိန်ဘာလိန်နှင့် Sahakian, 2007; Potenza, 2007b) ။ ဆနျ့ကငျြ, compulsive (functional ချို့ယွင်းမှဦးဆောင်ရိပ်မိအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုတားဆီးဖို့လေ့သို့မဟုတ်ကျပုံစံထုံးစံ၌ unpleasantly ထပ်တလဲလဲပြုမူလုပ်ဆောင်တဲ့သဘောထားကိုကိုယ်စားပြုတယ်WHO က, 1992; ဟော်လန်နှင့် Cohen ကို, 1996; ချိန်ဘာလိန် et al, 2006b) ။ တစ်ဦးချင်းစီချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ကြောင်းတွင်ဤနှစ်ခု Construction (အလားတူအဖြစ်လုံးဝဆန့်ကျင်, ဒါမှမဟုတ်တနည်းအဖြစ်ရှုမြင်စေခြင်းငှါStein နှင့်ဟော်လန်, 1995) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအလားအလာမော်တာသို့မဟုတ်သိမြင်တုံ့ပြန်မှုများ၏အာရုံစူးစိုက်မှု, အမြင်နှင့်ညှိနှိုင်းအပါအဝင်အာရုံကြောဖြစ်စဉ်များ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအတွင်းအပြောင်းအလဲတချို့ပါဝငျသညျ။
Neuroanatomical မော်ဒယ်များသည်သီးခြားဖြစ်သော်လည်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သော 'compulsive' နှင့် 'impulsive' cortico-striatal circuits များ၊ neurotransmitter များကကွဲပြားစွာ modulated (ရှိနေခြင်း) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။Robbins, 2007; ဘရူနှင့် Potenza, 2008) ။ အဆိုပါ compulsive ဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင်တစ်ဦး striatal အစိတ်အပိုင်း (caudate နျူကလိယ) compulsive အပြုအမူတွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်ပြီးတစ်ဦး prefrontal အစိတ်အပိုင်း (orbitofrontal cortex, OFC) သူတို့အပေါ်မှာ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုဖြစ်နိုင်သည်။ အလားတူပဲ, ထကြွလွယ်သောဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင်တစ်ဦး striatal အစိတ်အပိုင်း (ventral striatum / နျူကလိယ shell ကို accumbens) ထကြွလွယ်သောအပြုအမူတွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်ပြီးတစ်ဦး prefrontal အစိတ်အပိုင်း (anterior cingulate / ventromedial prefrontal cortex, VMPFC) inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဒီ model အတွက်အဲဒီအပြုအမူတွေကိုမောင်းကြောင့်အနည်းဆုံးနှစ်ခု striatal အာရုံကြော circuitries (တဦးတည်း compulsive တထကြွလွယ်သော), နှင့်ဤအပြုအမူထိန်းချုပ်နှစ်ခုသက်ဆိုင်ရာ prefrontal circuitries အဲဒီမှာတည်ရှိ။ အဆိုပါ prefrontal အစိတ်အပိုင်းများထဲတွင် striatal အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်မူမမှန်အတွင်း Hyperactivity (ယူဆရ hypoactivity), အရှင်ညှဉ်းဆဲခွဲအစိတ်အပိုင်းအပေါ်မူတည်ပြီးထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ် compulsive အပြုအမူတွေကိုကွပ်မျက်တစ်ခုတိုးလာအလိုအလျောက်သဘောထားဖြစ်ပေါ်စေမည်။ (ဥပမာဆုလာဘ်မှလျော့နည်းသွား striatal activation နှင့်ဆက်စပ်သော) cortico-striatal ဆားကစ်အတွင်းရှိအခြားဖြစ်နိုင်တဲ့မူမမှန်လည်းဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကာလအတွင်းရန်ထင်ရသောထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ် compulsive အပြုအမူတွေကိုအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားရောဂါဗေဒနှင့် / သို့မဟုတ်ဤအာရုံကြောစနစ်များအတွင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာကြောင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအားဖြင့်ဤသူသတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသို့အသာပုတ်ပါကြောင်းသိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏တာဝန်များကိုသုံးပြီးစူးစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဘာထကြွလွယ်သောတိုက်နယ်အတွက်ပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်ထွက်စတင်သည်တစ်ဦးဟာ compulsive ဆားကစ်အတွက်ပြဿနာများနှင့်အပြန်အလှန်အဖြစ်တက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါအားဖြင့်အဆိုပြုထားသည့်ထကြွလွယ်သော-compulsive diathesis မော်ဒယ်ဆီသို့အထောက်အကူဖြစ်စေမည်အကြောင်း, ဤအအလုပ်လုပ်တဲ့စနစ်များအကြားထပ် Hollande နဲ့ Wong (1995) (ဘရူနှင့် Potenza, 2008).
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုအချို့ရှိပြီးစိတ်ဖိအားနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုအမူများသည်အနည်းဆုံး phenotypic အကြောင်းများကြောင့်အဓိကနှင့်အဆိုးရွားဆုံးသောအရာများအဖြစ်ထင်ရသည့်အတွက်တည်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားမကြာခဏ DSM-IV-TR (APA) ရောဂါရှာဖွေရေးအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးခွဲခြားဤသည်မကြာခဏအလွန်အမင်း heritable ရောဂါများ, obsessive- compulsive ရောဂါ (OCD), ခန္ဓာကိုယ် dysmorphic ရောဂါ, Tourette ရဲ့ရောဂါ, trichotillomania, အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (ADHD), ရောဂါဗေဒလောင်းကစား, နှင့်ပစ္စည်းစွဲ (SAs) ။ စိတ် ၀ င်စားမှုမှာအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာကို (အဓိကလက္ခဏာသုံးခုထဲကတစ်ခုအဖြစ်) နှင့် (ဆက်စပ်သောလက္ခဏာနယ်ပယ်များထဲမှတစ်ခု) impulsive အပြုအမူအား (compulsive behavior) နှစ်မျိုးလုံးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။
အစဉ်အလာအရ, compulsive နှင့်ထကြွလွယ်သောမမှန်ရှုထောင့်တစ်ခုတည်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်အဆုံးမှာကြည့်ရှုအားပေးကြသည်ဟူ။ ၎င်း, ယခင်ထိခိုက်မှုကိုရှောင်ရှားရန်အလိုဆန္ဒအားဖြင့်မောင်းနှင်ပြီးနောက်တစ်ခုကိုဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့်အပြုအမူများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သို့သော်ဘာသာပြန်ခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများမှရရှိသောသက်သေအထောက်အထားများအရအပြုအမူဆိုင်ရာတားမြစ်ခြင်းများကို ဦး တည်သည့်ပုံစံသည်ရှေ့မှောက်တွင် - အထက်သို့စီးဆင်းနေသော cortical ထိန်းချုပ်မှုများမှဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသို့မဟုတ်အစဉ်အလာအားဖြင့်သွေးကြောအတွင်းရှိအလွန်အကျွံလှုပ်ရှားမှုမှဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ ။ ထို့ကြောင့် polar opposites များအစား compulsivity နှင့် impulsivity တို့သည် orthogonal အချက်များကိုကိုယ်စားပြုပြီး၎င်းရောဂါများကိုဒီဂရီမတူကွဲပြားမှုအမျိုးမျိုးတွင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ထိုအပုံမမှန်အတော်များများဟာ (shared pathophysiological ယန္တရားများများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေခဲ့ရသည်, တစ်ခုခုကိုအတူတူပင်တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ် Cluster အတွင်းမိသားစုများအတွင်းအတူတကွဖြစ်ပေါ်လေ့Holland et al, 2007b) ။ ထို့အပွငျထပ်အထောက်အထားအချို့မမှန်ဖြတ်ပြီးကုသမှု-တုံ့ပြန်ရှိသေး၏။ (နှင့် SSRIs မှ antipsychotic အေးဂျင့်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်; OCD ပုံမှန်အား reuptake inhibitors serotonin တုံ့ပြန်မှု (clomipramine နှင့်ရွေးချယ် SRIs, SSRIs SRIs)Fineberg et al, 2005) ။ Antipsychotics ဆေးများသည် Tourette ၏ရောဂါကိုပထမဆုံးကုသပေးသောကြောင့် SSRIs နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် Tic နှင့်ဆက်စပ်သော OCD တွင်ပိုမိုထိရောက်ကြောင်းပြသသည်မှာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။Bloch et al, 2006) ။ autistic မမှန်နဲ့ဆက်စပ် compulsive လည်း (အနိမ့်ထိုး SSRI ရန်နှင့် antipsychotics တုံ့ပြန်စေခြင်းငှါKolevzon et al, 2006) ။ ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုများအတွက်အတည်ပြုချက်ကိုလိုအပ်သည်သော်လည်း Trichotillomania (SRIs ရန်နှင့် antipsychotics တုံ့ပြန်စေခြင်းငှါချိန်ဘာလိန် et al, 2007d) ။ ADHD, အခြားတစ်ဖက်တွင်, noradrenergic reuptake inhibitors အဖြစ် dopaminergic အေးဂျင့် (ဥပမာစိတ်ကြွဆေး), ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းမှတုံ့ပြန်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမမှန်လည်း (opiate ရန်တစ်ကုထုံးတုံ့ပြန်မှုမျှဝေနိုင်ပါသည်ဘရူ et al, 2008).
အကြောင်းပြချက်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွက်ချက်ခြင်း၊ လက်တွေ့အချက်အလက်တစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြwithinနာများအတွင်းပေါ်ပေါက်လာသောဆက်စပ်လက္ခဏာများကိုများပြားစွာရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ အမှန်မှာဤမသန်စွမ်းမှုအုပ်စုသည် phenotypic သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခြင်းနှင့်ထပ်တူပြုခြင်းတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အတူဖြစ်ပွားမှုအချို့ ADHD သို့မဟုတ် compulsive အပြုအမူလက္ခဏာမပြ, အခြားသူများကို ADHD ပြသ, အခြားသူများ OCD, ဒါပေမယ့်အခြားသူများကို OCD မတူကြောင်းထပ်တလဲလဲမော်တာအပြုအမူတွေကိုပြသ။ ဘာသာပြန်ဆိုင်ရာသုတေသနသည်အခြေခံယန္တရားများ၏ရှုထောင့်မှစုံစမ်းစစ်ဆေး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏တိကျသောရှုထောင့်များကိုမောင်းနှင်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများကိုမှတ်သားနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည် Endophenotypes များသည်တိုင်းတာ။ ရနိုင်သောအမွေများ၊ သီအိုရီများသည်လက်တွေ့ဖြစ်စဉ်နှင့်ရောဂါ - လွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်သောရောဂါလက္ခဏာများအကြားအလယ်အလတ်အနေအထားတွင်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကား 'အလယ်အလတ် phenotypes' ကိုလက်တွေ့ထုတ်ဖော်အပြုအမူထက် polygenic စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇအန္တရာယ်နှင့်ပိုမိုဆက်စပ်ဆက်စပ်သည်ဟုယူဆနေကြသည်Gottesman နှင့်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, 2003; ချိန်ဘာလိန်နှင့် Menzies, 2009) ။ ရောဂါ Endophenotypic မော်ဒယ်များရှုပ်ထွေးသောဦးနှောက်မမှန်များ၏မျိုးဗီဇအခြေခံကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုအားရှင်းလင်းထားသည့်အဘို့နှင့်အရှင်အဖြေရှာတဲ့ခွဲခြားအသိပေးဘို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။ လောလောဆယ်ထကြွလွယ်သောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောရောဂါများလူထုကို DSM-IV အမျိုးအစားအတွင်းခွဲခြားထားပါသည်။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်းမှလာမည့် DSM-V ကိုတည်းဖြတ်မူများအတွက် OCD, စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန် (ICDs) ၏ပြန်လည်ခွဲခြားစဉ်းစားအဖြစ် (Fineberg et al, 2007a), ဤရောဂါ၏လာမှုကိုထောက်ပံ့ယန္တရားများပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အချိန်မီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်တှငျကြှနျုပျတို့ထကြွလွယ်သောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူနှင့်ထကြွလွယ်သောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောရောဂါဥပမာဆီသို့မိမိတို့၏ပံ့ပိုးမှုများဖြင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောနှင့် neuropsychological ယန္တရားများစဉ်းစားပါ။ ကျနော်တို့ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အကြှနျုပျတို့၏ကိုယ်ပိုင်ယူနစ်ကနေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအလုပ်အပါအဝင်မကြာသေးမီကအဖြစ်သေးထုတ်ဝေခြင်းနှင့်အတည်မပြုရသေးသော Translational လေ့လာမှုများ, လူ့ endophenotypic သုတေသနနှင့်လက်တွေ့ကုသမှုစုံစမ်းပါဝင်သော, ဖြည့်စွတ်အချက်အလက်များ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကနေသက်ဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်စုဝေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ striatum (caudate နျူကလိယ) medial ရန်, function အသားအရောင်ခွဲခြားသည်အပြိုင်စကားတွေအပေါ်နေကြပါတယ် OFC ထံမှ cortico-striatal အာရုံကြော Project, အဆိုပြုထားသော, (နျူကလိယ shell ကို accumbens) compulsive လှုပ်ရှားမှုမောင်းထုတ်ရန်အဆိုပြုထားသော, နှင့် anterior cingulate / VMPFC ထံမှ ventral striatum မှ ထကြွလွယ်သောလှုပ်ရှားမှုမောင်း, သူတို့အကြား Cross-talk (ရန်Robbins, 2007; ဘရူနှင့် Potenza, 2008()ပုံ 1).
compulsive နှင့် Impulse: စိတ်ရောဂါမှပံ့ပိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်များ။ ထကြွလွယ်သောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောရောဂါများအဖြစ်ဝင်ရိုးစွန်းဆန့်ကျင်ဘက်ယူဆနိုင်ပါတယ်သော်လည်း, နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal အာရုံကြောဆားကစ်၏ cortical ထိန်းချုပ်မအောင်မြင်မှုများနှစ်ဦးစလုံးများကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ ...
(ဈ) မည်မျှ compulsive နှင့် Impulse သည်ဤရောဂါမှအထောက်အကူဖြစ်စေပါဘူး, (ii) အဘယျအတိုငျးအတာအထိသူတို့ shared သို့မဟုတ်သီးခြားအာရုံကြော circuitry အပေါ်မူတည်ပါဘူးရန်, (iii) ဖြန်ဖြေ monoaminergic ဘာတွေလုပ်နေလဲဤဒေတာကိုအသုံးပြုခြင်း, ငါတို့အပါအဝင်သော့ချက်မေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးပမ်း ယန္တရားများ, (ဃ) ထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ် compulsive အပြုအမူအစိတ်အပိုင်းများကိုလက်တွေ့ကုသမှုနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်၏အခြင်းတန်ဖိုးပါဘူး, နှင့် (v) အပြည့်အဝကဤဒေတာပြီးရှိကြတယ်တဲ့စညျးလုံးရှုထောင်မော်ဒယ်ရှိသလော ငါတို့သည်လည်းကျနော်တို့အများဆုံး fruitfully ကိုလယ်တိုးစေခြင်းငှါယုံကြည်အနာဂတ်သုတေသနများအတွက်အလားအလာဖို့အာရုံကိုဆွဲပါ။
Impulse AND compulsive ဘာသာပြန်ဆိုသူမော်ဒယ်များ
ရည်ရွယ်ချက် neurocognitive စမ်းသပ်မှု (pharmacological အေးဂျင့်ကသူတို့အကျိုးရှိသောလက်တွေ့သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုသောယန္တရားများ elucidating နှင့်လက်တွေ့ရလဒ်များခန့်မှန်းဘို့အလားအလာကိုင်ချိန်ဘာလိန် et al, 2007e; ဘရူနှင့် Potenza, 2008) ။ အထိခိုက်မခံနဲ့ဒိုမိန်း-တိကျတဲ့ neurocognitive တာဝန်များကိုအသုံးပြုခြင်း, Impulse နှင့် compulsive နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal circuitry ၏ dissociable အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သောသီးခြားရှုထောင့် (အတူလူသားတွေနှင့်စမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်သီးခြားနှင့် quantifiable neurobiologically တိကျတဲ့ domains များသို့ fractionated စေခြင်းငှါWinstanley et al, 2006).
ဒေတာကို Impulse တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကွဲပြား neurocognitive ယန္တရားများကနေရယူထားခြင်းစေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။ ဤရပ်တန့် signal ကိုတုံ့ပြန်မှုအချိန် (SSRT) တာဝန် (အားဖြင့်တိုင်းတာ pre-အစွမ်းထက်မော်တာ disinhibition တဲ့သဘောထားကို, ပါဝင်သည်Aron နှင့် Poldrack, 2005), ညာဘက်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ၏ activation မှတဆင့်လူသားတွေအတွက်ကမကထပြုခဲ့ (RIF) cortex နှင့်၎င်း၏ subcortical ဆက်သွယ်မှု (ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ et al, 2003) နှင့် norepinephrine ခြင်းဖြင့်ကြွက်များနှင့်လူ့သတ္တဝါတွေအတွက် modulated (ချိန်ဘာလိန် et al, 2006c, 2007a; Cottrell et al, 2008), မဟုတ် serotonin (Clark က et al, 2005; ချိန်ဘာလိန် et al, 2006d) ။ နောက်ထပ်ရှုထောင့်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ခြေ serotonergic မော်ဂျူအောက်မှာ orbitofrontal နှင့်ဆက်စပ် cortical circuitry မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့သည့်ကိန်းဘရစ်လောင်းကစား Task ကို (CANTAB), (အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသို့မဟုတ်လောင်းကစားလုပ်ငန်းများကိုဖြင့်တိုင်းတာ, ဆန္ဒပြည့် delay လုပ်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောရေရှည်အကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းချက်ချင်းသေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ်ရွေးချယ်ရာတွင်အတွက်အခက်အခဲကပါဝင်ပတ်သက်ရော်ဂျာ et al, 1999b) နှင့်ပူးတွဲ dopaminergic အောက်မှာ subcortical circuitry နှင့် serotonergic ထိန်းချုပ်မှု (Winstanley et al, 2006) ။ တစ်ဦးကတတိယအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော Reflection Task ကို (အဖြစ်သတင်းအချက်အလက်နမူနာတာဝန်များကိုဖြင့်တိုင်းတာ, တစ်ဦးရွေးချယ်မှုမချခင်မလုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များနမူနာပါဝင်သည်Clark က et al, 2006) နှင့်ဖြစ်နိုင်သည် 5-ရွေးချယ်မှု Serial တုံ့ပြန်မှုအချိန် Task ကို (5-CSRTT) (Robbins, 2002()စားပွဲတင် 1).
Neurocognitive ဒိုမိန်းအဆိုအရ Impulse နှင့် compulsive Subdividing: လုပ်ငန်းများနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော / Neurochemical ဆက်စပ်မှု
compulsive, ဖြစ်ကောင်းနည်းကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်သည်။ (တိကျသောမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လေ့လာသင်ယူတာဝန်များကိုဖြင့်တိုင်းတာအပျက်သဘောတုံ့ပြန်ချက်ပြီးနောက်အပြုအမူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဆိုလိုသည်မှာနိုင်စွမ်း,) သင်ယူခြင်း (ဈ) မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်နှင့် (ii) အပိုရှုထောင် (ED) အာရုံစူးစိုက်မှု Set-ရွှေ့ပြောင်းအတွက်ဆုံးရှုံးမှု, တစ်ဦးချင်းစီ (၎င်း၏စကားရပ်ဆီသို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်Dias et al, 1996; Clarke et al, 2005) ။ နှစ်ဦးစလုံးလိုငွေပြမှုသိမြင်လွယ်ပြင်လွယ်မရှိတဲ့၏အစီအမံဖွဲ့စည်းပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်သီးခြားအာရုံကြော circuitry အားဖြင့် subserved ပုံရသည်။
ပြောင်းပြန်သင်ယူမှု (မျိုးစိတ်ဖြတ်ပြီး OFC မှတွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့်အာရုံချို့ယွင်း (သို့သော်မပေး dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC) ဖြစ်ပါသည်Dias et al, 1996; ဘာလင် et al, 2004; Hornak et al, 2004; Boulougouris et al, 2007) ။ လူသားတွေခုနှစ်, OFC (သင်ယူခြင်းမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ကာလအတွင်းရွေးချယ်မြှင့်လုပ်ဆောင်Hampshire ပြည်နယ်နှင့် Owen, 2006) ။ ဆနျ့ကငျြဘမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် PFC မှတွေ့ရှိရပါသည် (မျောက်ဝံများအတွက် ED Set-ပြောင်းလဲအယှက်Dias et al, 1996), နှင့်လူသားတွေအတွက်တာဝန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်နိုင်ငံ ventrolateral prefrontal cortex (VLPFC ၏ရွေးချယ် activation နှင့်ဆက်စပ်နေသည်) (Hampshire ပြည်နယ်နှင့် Owen, 2006()စားပွဲတင် 1).
ကြွက်များတွင်အပါအဝင် 5-HT ယန္တရားများနှင့်အတူသင်ယူမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ချိတ်ဆက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားများ, (ယခုရှိပါသည်Masaki et al, 2006; Boulougouris et al, 2008; Lapiz-Bluhm et al, 2009), Non-လူ့မျောက်ဝံများ (Clarke et al, 2004, 2005; Walker က et al, 2009) နှင့်လူသား (ပန်းခြံ et al, 1994; ရော်ဂျာ et al, 1999a; အစဉ် et al, 2005) (, pharmacological neurochemical နှင့်အစားအသောက်ထိန်းသိမ်းရေးအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်မျောက်တွေကိုအတွက်မျိုးဗီဇ polymorphic ၏သက်သေအထောက်အထားများလက်ဝဲ et al, 2007) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်, အထူးသဖြင့်ထိုသို့သော OFC (ဥပမာအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဒေသများအတွက်ဦးနှောက် serotonin လျှော့ချ Clarke et al, 2004), တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သင်ယူမှုချို့ယွင်း။ တစ်ဦး 5-HT-2A အဲဒီ receptor ရန်လည်း (သင်ယူခြင်း Spatial မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်အယှက်မှပြသထားပြီး၏ system administratorBoulougouris et al, 2008) ။ တစ်ဦးက 5-HT6 အဲဒီ receptor ရန်လည်း (ကြွက်များတွင်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပုံစံအပြောင်းအလဲလုပ်နှစ်ဦးစလုံးကိုတိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီးHatcher et al, 2005) ။ သို့သျောလညျး, (လူသားတွေအတွက်မကြာခဏ tryptophan ကွယ်ပျောက်သွားပြီးနောက်တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သင်ယူမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုရှာဖွေအချို့ဆုံးရှုံးမှုတှေရှိခဲ့တယျTalbot et al, 2006) နှင့်ကြွက် (ဗန် der Plasse နှင့် Feenstra, 2008), နှင့်ကြွက်များတွင် serotonin Transporter ချို့တဲ့လည်း (ရိုးရှင်းသော Spatial မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ထိခိုက်မထင်ထားဘူးHomberg et al, 2007).
5-HT2 receptor Subtype မေအထောက်အကူပြု compulsive အပြုအမူ
5-HT receptors ၏ဆတိုးကိန်းတိကျတဲ့ ligands ဖှံ့ဖွိုးတိုးတနှစ်အောက်သောအဘို့ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ပဏာမသက်သေအထောက်အထား compulsive အပြုအမူတွေအတွက် 5-HT2 receptors များအတွက် function ကိုအကြံပြုထားသည်။ 5-HT2C receptors ချို့တဲ့ Transgene ကြွက် (OCD များအတွက်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်မော်ဒယ်ဖွဲ့စည်းကြောင်းအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူပုံစံများဖွံ့ဖြိုးChou-အစိမ်းရောင် et al, 2003) ။ မကြာသေးမီ pharmacological ဒေတာ 5-HT2C အဲဒီ receptor activation တိုးလာ compulsive နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဆန့်ကျင်ဘက်တွေ့ရှိချက်ညွှန်ပြအဖြစ်သို့သော်အခြားဒေတာနှင့်အတူဤမျိုးရိုးဗီဇပြင်ဆင်မှုမှရရှိသောဒေတာတစ်ခုသိသာမတိုက်ဆိုင်, ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့် Transgene ပြင်ဆင်မှုအတွက်သတ်မှတ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအစားထိုးဖြစ်စဉ်များ၏ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် OCD တစ်ဆုခခြံကို T-ဝင်္ Alternative ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်, Tsaltas et al (2005) မီတာ-chlorophenylpiperazine (mCPP) ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, အစွမ်းထက် 5-HT2C agonist သက်ရောက်မှုနှင့်အတူရောထွေး serotonin agonist တွေ့ တိုးမြှင့် တုံ့ပြန်၏ဇွဲသို့မဟုတ် compulsive တစ်ခု SSRI (fluoxetine), ဒါပေမယ့်မ benzodiazepine သို့မဟုတ် desipramine နှင့်အတူနာတာရှည် pretreatment သော်လည်း, mCPP ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖျက်သိမ်း။ အဆိုပါ 5-HT1B အဲဒီ receptor agonist naratriptan နှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုနာတာရှည် SSRI ကုသမှုအားဖြင့်ချ-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံရနိုငျသော 5-HT2C အဲဒီ receptor များအတွက်သီးခြား function ကို, အကြံပြု, ဒီမော်ဒယ်အတွင်း compulsive မသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ OCD လူနာများတွင် mCPP နှင့်အတူစူးရှ pharmacological စိန်ခေါ်မှု (OCD symptomatology ပိုမိုဆိုးရွားHolland et al, 1991b) ။ ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်း (fluoxetine နှင့်အတူ pretreatment အားဖြင့် attenuated ခဲ့သည်Holland et al, 1991a) နှင့် clomipramine (ဇော et al, 1988) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူထိုမှတပါး, တသမတ်တည်း, Boulougouris et al (2008) တစ်ဦး 5-HT2C အဲဒီ receptor ရန်တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သင်ယူမှုတိုးတက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, prefrontal 5-HT2A receptors ၏ activation (SSRIs ၏ anticompulsive အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အဆိုပြုပြီးပါပြီWestenberg et al, 2007) ။ ဒုတိယမျိုးဆက် antipsychotics schizophrenia နှင့်အတူလူနာအတွက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့် (ဒီအစွမ်းထက် 5-HT2A ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းမှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီPoyurovsky et al, 2008), သော်လည်း dopamine (DA) အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအခြားဖြစ်နိုင်ခြေယန္တရားကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ OCD အတွက် SSRIs နှင့်အတူပေါင်းစပ်သည့်အခါထိုမှတပါး, ဒုတိယနှင့်ပထမမျိုးဆက် antipsychotics (လက်တွေ့ထိရောက်မှုကိုပြသFineberg နှင့် Gale, 2005), ဖြစ်ကောင်းတိုကျရိုကျ cortex အတွင်း DA လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် (Denis et al, 2004).
Impulse AND compulsive ၏ PHARMACOLOGICAL differential; receptor LIGANDS
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များခုနှစ်, Impulse နှင့် compulsive ၏အစီအမံအပေါ် 5-HT2A နှင့် 5-HT2C အဲဒီ receptor ရန်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖွယ် dissociation လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်။ အဆိုပါ 5-CSRTT တွင်တစ်ဦး 5-HT2C အဲဒီ receptor ရန် (SB24284) ၏စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှုပုံမှန်အား 5-dihydroxytryptamine ၏ intracerebroventricular အုပ်ချုပ်ရေးကထုတ်လုပ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 5,7-HT ကွယ်ပျောက်သွားပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်တိုးမြှင့် Impulse ပိုမိုဆိုးရွား; Impulse အတွက်အလားတူ SB24284-related တိုးမြှင် (အတုအယောင်-operated ကြွက်များတွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်Winstanley et al, 2004) ။ ဆနျ့ကငျြတဲ့ရွေးချယ် 5-HT2A အဲဒီ receptor ရန် (M100907) ၏စနစ်တကျအုပ်ချုပ်မှုအတုအယောင်-operated နှင့် 5-HT-ကုန်ခမ်းကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် Impulse remediating, ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ရပ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ နဂိုအတိုင်းတိရိစ္ဆာန်များတွင်ဤခြားနားသည့် 5-HT2A နှင့် 5-HT2C အဲဒီ receptor ရန်အတွက်နျူကလိယ accumbens ထဲသို့မူးယစ်ဆေးတာဟာအားဖြင့် mimicked ခဲ့ကြသည်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ဒါပေမယ့်မ mPFC, (Cottrell et al, 2008) ။ သို့သော် 5-CSRTT ၏မူကွဲအတွက်ကြောင့် 5-HT2A အဲဒီ receptor ရန်၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် mPFC ပြုတ်ရည်ပြီးနောက် Impulse အတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချ detect လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆုံးစွန်သောတွေ့ရှိချက် Lister hood ကိုကြွက်များ၏လူဦးရေအတွက်ကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနှင့်ဒေသတွင်းအထူးနားလည်သဘောပေါက်အတွက်အရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြခြင်း, mPFC အတွက် 5-HT ၏အကြီးမြတ်ဆုံးပြင်းအားခဲ့အရှိဆုံးထကြွလွယ်သောတိရိစ္ဆာန်များခဲ့ကြောင်း, လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီခဲ့ကြ 5-HT နှင့်အမူအကျင့် disinhibition အကြားဆက်ဆံရေးဟာ။
Impulse အပေါ်ဗဟို 5-HT ထိန်းသိမ်းရေးများ၏သက်ရောက်မှုအာရုံကို function ကိုအပေါ်သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုအချို့ဆနျ့ကငျြဘရပ် se နှုန်း အဆိုပါ 5-CSRTT ၌တည်၏။ ထကြွလွယ်သောအပြုအမူတိုးမြှင့်အခါအများအပြားစာတမ်းများ (အာရုံစူးစိုက်မှုတိကျမှန်ကန်မှုကိုအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်တိုးမြှင့်ဖြစ်စေလေ့လာတွေ့ရှိပါပြီHarrison et al, 1997) သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော ketanserin သို့မဟုတ် M5 (အဖြစ်စနစ်တကျသို့မဟုတ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် PFC 2-HT100907A အဲဒီ receptor ရန်နှင့်အတူကုသမှုပြီးနောက်Passetti et al, 2003; Winstanley et al, 2003) အဖြစ် 5-HT1A အဲဒီ receptor agonist 8-OHDPAT (Winstanley et al, 2003) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူကျော် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကို function ကိုသာထိထိရောက်ရောက်မဒီစမ်းသပ်မှုအခြေအနေမှာ coupled နှင့် ADHD ကဲ့သို့သော syndrome အတွက်နှစ်ခုအကြားမျှရိုးရှင်းသောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုသောအယူအဆနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြသည်။
compulsive ၏အတိုင်းအတာပေါ်ဤအကြောင်းတူညီတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုထပ်ဆောင်းဒြပ်စင်မိတ်ဆက်သည်။ အဆိုပါ OFC ၏တွေ့ရှိရပါသည်မှအထိခိုက်မခံကြောင်းရိုးရှင်းအမှတ်စဉ် Spatial မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်စမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်း (Boulougouris et al, 2007), ဒါကြောင့်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှုကထုတ်လုပ်ကြောင်း 5-HT2C အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း () ရှာတွေ့ခဲ့သည် သင်တန်းနည်းပြ တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သင်ယူမှု။ M1000907 (က impairing ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့Tsaltas et al, 2005) ။ ပြန်လည်ကုစား၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဒီကြောင်း Impulse ၏အစီအမံများအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်အရာကိုဆန့်ကျင်ဘက်ကြောင်းသတိပြုပါ။ အဆိုပါ 5-HT2C ရန်နှင့်အတူကုသမှုပြီးနောက်သင်ယူခြင်းမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်အလားတူအဆင့်မြှင့်တင်မှုများလည်း (ထို OFC (Boulougouris, Glennon, Robbins, အတည်မပြုရသေးသောရလဒ်များကို) သို့ပြုတ်ရည်ပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့သည်စားပွဲတင် 2).
Impulse နှင့် compulsive ၏ Rat & Models အပေါ် 5-HT2C နှင့် 5-HT2A receptor ရန်၏ differential အကျိုးသက်ရောက်မှု
မည်သို့ပင်ယန္တရား၏တိကျသော elucidation ၏, ဤဒေတာ pharmacologically အကြံပြုခြင်း, Impulse နှင့် compulsive ဤပုံစံများ dissociate သူတို့မပေးနိုင်ကြောင်း အမူအကျင့်တားစီးနေတဲ့ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အပေါ်တွင်မူတည်။ အဆိုပါ dissociation အလွယ်တကူမျိုးစိတ်မူးယစ်ဆေး, ဒါမှမဟုတ်အဲဒီ receptor ကိုအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသောလှုံ့ဆျောမှုပုံစံများ၏ထိုးများတွင်ကွဲပြားမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရှင်းပြခဲ့လို့မရနိုင်ပါ, နှစ်ဦးစလုံးတာဝန်များကိုထိရောက်စွာစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်တုံ့ပြန်မှုတားစီးမလိုအပ်သူတို့အဖြစ်တာဝန်-မှီခို-ဖြစ်ရမည်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုခွဲခြားသောလုပ်ငန်းတာဝန်ကစေ့စပ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်များအချို့နဲ့အခြားရှုထောင့်ရှိကွောငျးကောက်ချက်ချ။ ဤရလဒ်သည်ကိုလည်း (ထိုထကြွလွယ်သော-compulsive diathesis မော်ဒယ်မှထောက်ခံမှုထုတ်ချေးသော Impulse နှင့် compulsive function သီးခြားနှင့်အပြန်အလှန် လက်ခံ. ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုHollande နဲ့ Wong, 1995) ။ သူတို့ကအစ Impulse နှင့် compulsive ရွေးချယ် 5-HT2 အဲဒီ receptor ligands အားဖြင့် dissociated နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအေးဂျင့်အသစ်လက်တွေ့ applications များမှာရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းနိုင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ (ထို OFC အတွက် 5-HT လျော့ကျ marmoset မျောက်အတွက်သင်ယူမှုအမြင်အာရုံအရာဝတ္ထုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ချို့ယွင်းနေသောထိုအအချက်အလက်များကိုတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီဘယ်လိုဖြေရှင်းရန်အရေးကြီးပါသည်ဖွစျလိမျ့မညျClarke et al, 2004, 2005; Yucel et al, 2007) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဤထင်ရသောကိုကန့်ကွက်သက်ရောက်မှုသီးခြားအာရုံကြောလမ်းကြောင်းမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်ဖွယ်ရှိယ့်ပုံပဲ: Impulse ၏ဖြစ်ရပ်အတွက် infralimbic VMPFC (ဧရိယာ 25) မှစီမံချက်များမှတဆင့်ဧရိယာကြွယ်ဝစွာ 5-HT2A receptors အားဖြင့် innervated နှင့်အပြင်းအထန်ထိခိုက်စေ်ပတ်သက်နေ နျူကလီးယပ် accumbens ၏ shell ကိုမျက်နှာသို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, (Vertes, 2004) နှင့်, compulsive ၏ဖြစ်ရပ်အတွက် OFC နှင့် caudate နျူကလိယ (သို့မဟုတ်ကြွက်များတွင် dorsomedial striatum အကြားဆက်သွယ်မှုအတွက်) (Schilman et al, 2008).
NEUROPSYCHOLOGICAL လုပ်စရာများအသုံးပြုခြင်း DISSOCIATING Impulse AND compulsive disorder
Impulse နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောရောဂါများများသောအားဖြင့်ထပ်တလဲလဲအတှေးသို့မဟုတ်အပြုအမူနှောင့်နှေးသို့မဟုတ်တားစီးဖို့အတော်လေးလျော့နည်းသွားနိုင်စွမ်းပါဝငျသညျ။ ထို့ကြောင့်မသင့်လျော်အပြုအမူနှိပ်ကွပ်သို့မဟုတ်ဟန့်တားပြဿနာများ (ထကြွလွယ်သောနှင့် compulsive နှစ်ဦးစလုံး symptomatology အထောက်အကူပြုနိုင်ချိန်ဘာလိန် et al, 2005; Stein et al, 2006) ။ ထိုကဲ့သို့သော SSRT အဖြစ်တာဝန်များကိုအပေါ်တိုင်းတာအဖြစ် ADHD (မော်တာတားစီးအတွက်ညံ့ဖျင်းပဋိသန္ဓေ ယူ. , ထကြွလွယ်သောလုပ်ရပ်များနှင့်ကြံ့ခိုင်ချွတ်ယွင်းသဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအစောပိုင်းစတင်ခြင်းတစ်ဦးရောဂါAron et al, 2003; Lijffijt et al, 2005) ။ ထိုကဲ့သို့သော atomoxetine နှင့် methylphenidate အဖြစ်သိမှတ်ခံစားမှု-တိုးမြှင့်အေးဂျင့်များ၏အုပ်ချုပ်ရေးလက္ခဏာတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ယူဆရတိုးလာ noradrenergic (သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည် dopaminergic) မှတဆင့်သရုပ်ဆောင်, ADHD နှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူများတွင် SSRT လိုငွေပြမှု ameliorates neurotransmission (ချိန်ဘာလိန် et al, 2007a).
OCD လူနာအတွက်လေ့လာစရာများ (ED-ပြောင်းလဲတာဝန်များကိုအပေါ် SSRT ချို့ယွင်းသူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်စွမ်းဆောင်ရည်ထင်ရှားပါပြီချိန်ဘာလိန် et al, 2006a, 2007c; Menzies et al, 2007a), အရောဂါမှထကြွလွယ်သောနှင့် compulsive နှစ်ဦးစလုံးပံ့ပိုးမှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ OCD probands ၏ထိခိုက်ပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးများ SSRT နှင့် ED-ပြောင်းလဲတာဝန်များကို (အပေါ်အလားတူချို့ယွင်းဝေမျှချိန်ဘာလိန် et al, 2007c) နှင့်အရှင် OCD လက္ခဏာတွေတစ်မရှိခြင်းရှိနေသော်လည်းမော်တာ Impulse နှင့်သိမြင်မှုတရားရှိဖို့အလားတူအဆင့်ဆင့်ပြပုံရသည်။ OCD မတူဘဲ, trichotillomania နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမှတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူ neurocognitive စမ်းသပ်ဘက်ထရီ application ကိုတစ်ဦး ICD အဖြစ်က၎င်း၏ DSM-IV ခွဲခြားနှင့်အတူတသမတ်တည်း, မော်တာတားစီးတစ်ဦးထက်ပိုသော focal နှင့်ရွေးချယ်ချို့ယွင်းပြသ (ချိန်ဘာလိန် et al, 2006b, 2007b) ။ unmedicated trichotillomania အတွက်မြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက် MRI လက်ဝဲ putamen နှင့်မျိုးစုံ cortical ဒေသများ (ခုနှစ်တွင်တိုးမြှင့်မီးခိုးရောင်-ကိစ္စသိပ်သည်းဆဖော်ထုတ်ချိန်ဘာလိန် et al, 2008b) ။ striatal ဒေသများတွင်တိုးမြှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စကိုလည်း (Tourette syndrome ရောဂါ၏လေ့လာမှုများအစီရင်ခံထားသည်Bohlhalter et al, 2006; Garraux et al, 2006) နှင့် OCD (Menzies et al, 2008a) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင် Tourette ၏ရောဂါလက္ခဏာခံစားနေရသောလူနာများသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်လုပ်ငန်းများတွင် OCD လူနာများထက်သိမြင်မှုအားနည်းခြင်းနှင့်သိသိသာသာပိုမိုအားနည်းခြင်းများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။Watkins et al, 2005Tourette နှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုသည်လောင်းကစားတာ ၀ န်ရှိထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆုလာဘ်သင်ယူမှုအားနည်းခြင်းအထောက်အထားများမတွေ့ရပါ။ခရော et al, 2005). Li et al (2006) Tourette's syndrome ရောဂါရှိသည့်ကလေး ၃၀ တွင် SSRT ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစွမ်းဆောင်ရည်ချို့တဲ့မှုကိုပြသရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
OCD အတွင်း compulsive နှင့်တုံ့ပြန်ထကြွလွယ်သောများ၏ထပ်တူ Impulse ပုံမှန်အားဖြင့်ကရောဂါဗေဒ compulsive ပြသနိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ, အရှင် compulsive မောင်းနှင့်ရှိမရှိမေးခွန်းပေါ်ပေါက် မပါဘဲ မော်တာ impulsivity ။ သို့ဆိုလျှင်မည်သည့်ရောဂါများသည် 'စင်ကြယ်သော' compulsivity ပြသနိုင်သနည်း OCD နှင့်စွဲစွဲလမ်းလမ်း - မတုန်မလှုပ်မနေရကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအထူးသဖြင့် ED ရွှေ့ပြောင်း၏ဒိုမိန်းအတွက်ချို့ယွင်းတိုးလာပြသခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်သည်အလွန်အကျွံသိမြင်မှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်သော်လည်းထပ်ခါတလဲလဲပြုမူသောအပြုအမူများ (ဆိုလိုသည်မှာစွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်အတင်းအဓမ္မ) များမပါ ၀ င်သော obsessive-compulsive personal disorder ၏လက်တွေ့တင်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထို့ကြောင့် obsessive-compulsive ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါရှေ့ပြေးပုံစံ - compulsive ရောဂါဖွဲ့စည်းလိမ့်မည် (Fineberg et al, 2007b) ။ Non-comorbid OCPD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကို အသုံးပြု. confirmatory လေ့လာမှုများကြိုဆိုမည်ဖြစ်သည်။
NEUROCOGNITIVE ENDOPHENOTYPES, OCD, နှင့်ကျော်လွန်
neurocognitive တာဝန်များကိုတရားမျှတစွာတိကျတဲ့ neuropsychological domains များခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါသွားရမည်အကြောင်း, ဖြည့်စွတ် neuroimaging တစ်ဦးရောဂါအတှကျအမြိုးရိုးဗီဇအန္တရာယ်အခြေခံသည့်ခန္ဓာဗေဒအလွှာနှင့်အာရုံကြောဆားကစ်မြင်ယောင်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ တစ်ဖွဲ့လုံး-ဦးနှောက် multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနည်းဆုံးရင်ပြင်၏ technique ကိုသုံးပြီး, neurocognitive နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI parameters များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် McIntosh နှင့် Lobaugh, 2004) နှင့်တစ်ဦးဝတ္ထု permutation စမ်းသပ်မှု, Menzies et al (2007a) မျိုးစုံခန္ဓာဗေဒက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အပြောင်းအလဲနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြတဲ့မော်တာ-တားစီးတာဝန် (ထို SSRT) ရက်နေ့တွင်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မိသားစုအပေါ်သက်ရောက်မှုများဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံး OCD လူနာ နှင့်၎င်းတို့၏ထိခိုက်ပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများ အဆိုပါ OFC နှင့် RIF cortex အတွက်မီးခိုးရောင်-ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ် (သမားရိုးကျအသီးသီး OCD နှင့် SSRT activation နှင့်ဆက်စပ်ဒေသများ) လျော့နည်းသွားနှင့်မီးခိုးရောင်-ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်တိုးလာသည့် SSRT ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာအောင်းနေချိန်များကရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်ကြာကြာအောင်းနေချိန်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ချို့ယွင်းမော်တာ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုပြ အဆိုပါ striatum, cingulate နှင့် parietal cortex ဒေသများတွင်။ ဤရလဒ်သည်, ပထမဦးဆုံးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI endophenotype-ဖြန်ဖြေမိသားစုနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်မျိုးရိုးဗီဇအဘို့အ OCD-related Impulse များအတွက်အန္တရာယ်ငြင်းခုန်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများလည်းစီးပွားဖြစ်လွယ်ကူစွာထိခိုက် alleles ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအဘို့, ဂန္အသင်းအဖွဲ့ဒီဇိုင်းများတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောအလယ်အလတ် phenotypes အတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအပေါ်တိကျသောမျိုးရိုးဗီဇသက်ရောက်မှုများအတွက်စမ်းသပ်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါ SSRT, မော်တာ Impulse တစ်အတော်လေးရောဂါ-Non-သတ်သတ်မှတ်မှတ်တာဝန်, ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခု endophenotype အပြင်ဘက်ဖြစ်ကောင်း OCD ဖို့ကန့်သတ်, ဒါပေမယ့်အပြင်အတွင်းရှိအခြားရောဂါဆက်စပ်နှင့်မရစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်, အထကြွလွယ်သော-compulsive မမှန်အတူတွေ့ရှိချက် ရောင်စဉ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ADHD နှင့်၎င်းတို့၏ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (မော်တာ-တားစီးတာဝန်များကိုအပေါ်အာရုံချို့ယွင်းပုံပေါ်Crosby နှင့် Schachar, 2001), ဒါပေမယ့်သေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး ADHD များအတွက်မိသားစုအန္တရာယ်နှင့်အတူသူတို့အဘို့ချို့ယွင်း၏ခန္ဓာဗေဒဆက်စပ်မှုအတူတူပါပဲသို့မဟုတ် OCD များအတွက်မိသားစုအန္တရာယ်နှင့်အတူလူကှာခွားရှိမရှိ။
cortex ၏တိုကျရိုကျဒေသများအတွင်းမီးခိုးရောင်-ကိစ္စ volumes ကိုယုတ်လျော့ခြင်းနှင့် striatum အတွက် volumes ကိုတိုးမြှင့်အကြားအတွင်း-ဘာသာရပ်ဆက်စပ်မှု (အစောပိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာပင်ကိုယ်မူလ OCD မော်ဒယ်များနှင့်အတူပဲ့တင်ထပ်နေBaxter et al, 1987) နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ် MRI လေ့လာမှုများ (ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှု, Menzies et al, 2008a) ။ OCD မိသားစုဝင်များအတွင်းပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်သုံးပြီးနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုကနေပဏာမတွေ့ရှိချက် (Menzies et al, 2008b) ဖော်ထုတ် cingulate cortex anterior ကပ်လျက်လက်ျာ medial တိုကျရိုကျ (ACC) အပါအဝင် complementary ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်အဖြူ-ကိစ္စမူမမှန်၏သက်သေအထောက်အထားများနှင့်ညာဘက် OCD လူနာပတျသကျတဲ့ကြိုတင်လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုနှင့်သဟဇာတ parietal cortex) ဇုန်ကပ်လျက်ယုတ်ညံ့ parietal ((Szeszko et al, 2005) ။ သို့သော်ထိခိုက် OCD မိသားစုဝင်များပါဝင်သည်ဤလေ့လာမှုတိုးချဲ့အသုံးပြုပုံကျနော်တို့ (OCD ဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြူ-ကိစ္စ endophenotypes အဖြစ်ကဤတွေ့ရှိချက်အဆိုပြုထားကြပါပြီMenzies et al, 2008b).
OCD နှင့်၎င်းတို့၏ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်အတူလူနာအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးနှောက်မူမမှန်အပြင်, သုတေသနဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အဆင်ပြေအောင် fMRI Paradigm သုံးပြီးနံရံပစ်ကစားနည်း-striatal circuitry ၏အလုပ်လုပ်တဲ့သမာဓိရှိစုံစမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး fMRI သိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပါရာဒိုင်းအသုံးပြုခြင်းကြောင့် OCD နှင့်၎င်းတို့၏ထိခိုက်ပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်အတူလူနာတုံ့ပြန်မှုများမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်စဉ်အတွင်းအောက်မှာ-activation နှစ်နိုင်ငံနှစ်ဦးနှစ်ဖက် OFC ၏ပြကြောင်းပြသခဲ့ပါသည်; သူတို့သည်လည်း (ED လမ်းကြောင်းသစ်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲနေစဉ်အတွင်း PFC ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရှုထောင့် underactivate မှတော်မှာချိန်ဘာလိန် et al, 2008a).
အတူတူ, ဒီတွေ့ရှိချက် neuroimaging နည်းစနစ် OCD များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း endophenotypes ၏ကြွယ်ဝသောအရင်းအမြစ်ကိုပေးနိုငျကွောငျးဖျောပွပါ။ ရလဒ် striatally ကမကထပြုခဲ့အပြုအမူတွေရဲ့ထိပ်တန်း -Down cortical တားစီး၏ပျက်ကွက်မှုဆိုလိုသီအိုရီနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြသည်။ သူတို့က OCD ကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများသောထူးခြားဆန်းကြယ်သောစိတ်စွဲလမ်းသောမွေးမြူရေးနှင့်စည်းကြပ်ဓလေ့ထုံးတမ်းများသည်ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိသောမိသားစု ၀ င်များအကြားမျှဝေသည့်တင်းကျပ်။ တားမြစ်ထားသောအပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုယေဘုယျရည်မှန်းချက်များဖြင့်လိုက်ပါသွားကြောင်းအကြံပြုကြသည်။ ထို့ကြောင့် 'သိမှုနှေးကွေးခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်း' ၌အခက်အခဲများသည် OCD ၏လက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာစေနိုင်သည်။ အနာဂတ်အလုပ်ကဤချဉ်းကပ်မှုကိုထကြွလွယ်သော - compulsive ရောင်စဉ်အပေါ်အခြားရောဂါများမှအောင်မြင်စွာယေဘူယျနိုင်ရှိမရှိဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။ putative endophenotypes ၏လက်တွေ့ဆက်စပ်မှု OCD probands နှင့်အတူရိုအမှတ်အသားများမျှဝေသူကို (နှင့်မည်သို့) Non-OCD-related ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်မတူစေခြင်းငှါရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များသည်မျိုးရိုးဗီဇအားနည်းချက်ရှိသူများအတွက် OCD ကိုထုတ်ယူနိုင်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်ကုသမှုများသည်ရောဂါစတင်ခြင်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနားလည်မှုလိုအပ်သည်။
ကြိုး ICDS နှင့်မော်ဒယ်
ထိုကဲ့သို့သော OCD အဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောရောဂါများမှမတူဘဲ, ထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအဖြစ်အချို့သော ICDs, မသက်ဆိုင်ဘဲမူလအနုတ်လက္ခဏာရေရှည်အကျိုးဆက်များ၏ရေတိုရေရှည်ဆန္ဒပြည့်ရွေးချယ်ရာတွင်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ ဘာလင် et al (2008) တစ်ဦးကိုရွေးချယ် neuropsychological ဘက်ထရီ (အပေါ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်မပါဘဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးချင်းစီဘာလင် et al, 2008) ။ ထိုကဲ့သို့သော Barratt Impulse စကေးအဖြစ် Impulse ၏ Self-အစီရင်ခံအစီအမံအပေါ်ပိုပြီးမြင့်မားသွင်းယူသူကိုရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်အချိန် (အချိန်မတန်တဆ) ၏ပျှမ်းမျှပိုမိုမြန်ဆန်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ခဲ့ prefrontal ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့တိုကျရိုကျအပြုအမူမေးခွန်းလွှာဖြင့်တိုင်းတာလိုငွေပြမှုပြသ -cortical ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူဘာသာရပ်များလည်းအိုင်အိုဝါ Gamble က Task ကို (ပေါ်မဲ့ဖြစ်စေသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြသBechara et al, 1994) နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလိုငွေပြမှု (ဥပမာ Spatial စီမံကိန်းနှင့် CANTAB ၏ကင်းဘရစ် subtests ၏စတော့ရှယ်ယာအပေါ်), အ OFC / VMPFC ဒေသအပါအဝင် prefrontal circuitry implicating ။ (OCD မတူဘဲWatkins et al, 2005; ချိန်ဘာလိန် et al, 2006b), set-ပုံစံအပြောင်းအလဲလုပ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် unimpaired ခဲ့သည်။ သို့သော်အခြားသောလေ့လာမှုများ (အလွန်အမင်း compulsive သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်း၏တိကျသောအစီအမံအပေါ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းရမှတ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် Impulse နှင့် compulsive ၏အစီအမံကုသမှုသင်တန်းကာလအတွင်းဥပမာ (အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်ကြောင်းကိုညွှန်ပြPotenza, 2007a; Blanco et al, 2009) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် Impulse နှင့် compulsive လုံးဝဆန့်ကျင်နေကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုနှင့်တိကျသောရောဂါတခုယာယီပြောင်းလဲနေသောထုံးစံ၌ပြောင်းရွှေ့စေခြင်းငှါအခြားအပေါ်မှာတယောက်ဆောက်လုပ်ရေးတစ်အများစုနေထိုင်ပြီးဖေါ်ပြခြင်းနဲ့အတူရှုပ်ထွေးပြီး, orthogonal ကြားဆက်ဆံရေးမျှဝေပါ။
Holland et al (2007a) , လက်တွေ့သိမြင်မှုနှင့် functional ဖြစ်စေပုံရိပ်အလုပ်များကိုဘက်ထရီကို အသုံးပြု. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (အများစုထကြွလွယ်သော) နှင့် OCD နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ (အများစု compulsive) မမှန်ပါဝင်သော age- နှင့်ကျား, မ-လိုက်ဖက်တစ်ဦးချင်းစီ၏နှိုင်းယှဉ်သုံးအုပ်စုများ, ။ ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပုံမှန်အားဖြင့်နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal circuitry ကိုသက်ဝင်ကြောင်းတုန့်ပြန်-တားစီးတာဝန်များကို (go / မသွားလာရင်း) ၏ကွပ်မျက်စဉ်အတွင်းအားလုံးသုံးရောင်စဉ်-ရောဂါအုပ်စုများ (သိမြင်) dorsal အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ fMRI activation ပြသခဲ့သည်နှင့် ACC ၏ ventral (စိတ်ခံစားမှု) ဒေသများ ။ လေးပါးအုပ်စုများအကြားမျှအရေးပါသောစွမ်းဆောင်မှုကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးအကြား-အုပ်စုတစ်စုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုးအားလုံးသုံးလူနာအုပ်စုများအတွက် ACC activation dorsal လျော့နည်းသွားပြသလေ့လာဆန်းစစ်။ ထို့ကြောင့်တုံ့ပြန်မှုတားစီးနေစဉ်အတွင်း, compulsive နှင့်ထကြွလွယ်သောနှစ်ဦးစလုံးရောဂါစနစ်တကျသည်ဤမမှန်ကိုဖြတ်ပြီးမော်တော်အပြုအမူတွေကိုတားစီးဖို့ပျက်ကွက်ဆီသို့အထောက်အကူရသောလျော့နည်းသွား dorsal ACC activation ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ ventral ACC ၏တစ်ဦးချင်းစီကို Activation ပုံစံများ Impulse သို့မဟုတ် compulsive ၏အစီအမံဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်အခါ, ရောဂါ-တိကျတဲ့အကြား-အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအုပ်စုတစ်စုအတွင်းမှာ TCI Impulse နှင့်စုစုပေါင်းထိခိုက်နစ်နာမှုရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်တိုးမြှင့်ထကြွလွယ်သောဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူ၏လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်များ (Neo-FFI Extraversion, စုစုပေါင်းအချိန်ခန့်မှန်းချက်များနှင့်အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုအတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်း ventral ACC / ventral striatum activation တိုးလာ ) ။ ထို့ပြင် ventral ACC (ဧရိယာ 25) တွင်တိုးမြှင့် activation နှင့်အတူလောင်းကစားသမားတွေ (ID ကို / ED အဆင့်ဆင့်ပြီးစီး) သိမြင်မှု Set-ရွှေ့ပြောင်း၏တာဝန်များကိုအပေါ်အနိမ့် compulsive ရမှတ်များပြသခဲ့တယ်။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, autistic (compulsive) အုပ်စုများ၏တိုးချဲ့ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်း ventral ACC / ventral striatum လှုပ်ရှားမှုတိုးလာ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော ဒုက္ခဆင်းရဲ-သက်သာရာ (အားဖြည့်) အလေ့အထကို၎င်း, ventral ACC (ဧရိယာ 25) ၏တူညီသောဒေသများအတွင်းတိုးမြှင့် activation တိုးချဲ့ compulsive ဆက်နွယ်နေကြောင်း (ID ကို / ED ချိန်ညှိစုစုပေါင်းအမှားများကို shift) နှင့်အချိန်ခန့်မှန်းချက်တာဝန်အပေါ် Impulse လျော့နည်းသွားသည်။
ဤ 'နှစ်ဆခွဲကွဲခြင်း' သည်လောင်းကစားခြင်းနှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာတွင်အမူအကျင့်တားဆီးစဉ်အတွင်း ventral corticostriatal လမ်းကြောင်းများအပေါ်တွင် neuromodulation သက်ရောက်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုတွင်ကွဲပြားခြားနားမှုများကအကြံပြုသည်။ ဤနေရာတွင်အခြားနေရာများတွင်ဖော်ပြထားသောကြွက်များမှအချက်အလက်များသည် 5-HT2C နှင့် 5-HT2A receptor antagonists များ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို 5-CSRTT နှင့် compulsivity (Spatial Serial Reversal Learning) တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။Tsaltas et al, 2005; Boulougouris et al, 2007) Carly ၏နှစ်ထပ်ကွမ်း dissociable တွေ့ရှိချက်များကိုလည်းကတညျး et alအဆိုပါ infralimbic ဒေသသို့ 5-HT1A agonist ၏တို့တွင်အရှင်သခင်တာဟာတစ် 5-HT5A အဲဒီ receptor ရန်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခြင်းနှင့်အတူတုံ့ပြန်ထကြွလွယ်သောသြဇာသက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲ (ထို 2-CSRTT အပေါ်) perseverative အပြုအမူလျှော့ချကုန်သည်များ et al, 2004) ။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်များတူညီအာရုံကြော circuitry လူ့အပြုအမူများ၏ထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ် compulsive ရှုထောင့်ကိုမောင်းနှင့် VMPFC (5-HT5A) နှင့် OFC (2-HT5C) တွင် 2-HT Subtype ကြောင်းနှင့် dorsal ACC လိုငွေပြမှုအတွက်တစ်ဦး function ကိုရှိစေခြင်းငှါစေခြင်းငှါအကြံပြု အဆိုပါအများစုထကြွလွယ်သော (ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း) တွင်တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော (OCD, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ) မမှန်။
ဆုခမြ, စစ်ကူ, AND DA
အဆိုပါ mesolimbic စနစ် DA လမ်းကြောင်း (ဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့်အတွက်အရေးပါတဲ့ function ကိုရှိပညာရှိ 2002) ။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်ခုနှစ်တွင်တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါတုံ့ပြန်မှုတားစီးနေစဉ်အတွင်း ventral ACC activation တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပဏာမရလဒ်တွေကိုရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက် TCI ဆုလာဘ်မှီခိုစာရင်းအပေါ်ဆုချခြင်းနှင့်ဆွ (အသစ်အဆန်းရှာ) ၏အဆင့်မြင့်ရှာလျော့နည်းထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု (ဘာလင် et al, 2008) ။ သို့သော်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူဘာသာရပ်များတခြားလေ့လာမှုတွေအစာစားချင်စိတ်ပြည်နယ်နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစမ်းသပ်ချက် (စဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့်ယင်း၏ ventral အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ACC ၏အတော်လေးလျော့နည်းသွား activation တွေ့ပြီPotenza et al, 2003a, 2003b) ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောရောဂါများမှလေးစားမှုနှင့်တကွ, ID ကို / ED အဆင့်ဆင့်အပေါ်တုံ့ပြန်မှု-တားစီးတာဝန်များကိုနှင့်တိုးမြှင့် compulsive စဉ်အတွင်းတိုးလာ ventral ACC activation အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုများနှင့်စုစုပေါင်းအမှားများကိုချိန်ညှိ OCD တစ် mesolimbic DA မော်ဒယ်နှင့်အညီတစ်ဦးဆွေမျိုးလိုငွေပြမှုကနေ dopaminergic လှုပ်ရှားမှုတိုးလာရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ (ယောလ, 2006).
အယူအဆအရ၊ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲသွေးထိုးလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့် mesolimbic DA လမ်းကြောင်းများကဆုလာဘ်စနစ်ကို 'sensitize' လုပ်နိုင်သည်။Robinson နဲ့ Berridge, 1993), အရာ, ဆငျးရဲသား prefrontal-cortex-mediated inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်မိလျှင်, DA related နှင့်ထင်ရသောထကြွလွယ်သော-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်။ အလွန်အကျွံ DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆွ (DA စတိုးဆိုင်များပျက်ဆီးခြင်းနှင့် anhedonia နှင့်စိတ်ကျရောဂါဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါKoob နှင့် Le Moal, 1997) ။ electrophysiological အသံသွင်းခြင်းဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်အမှန်စင်စစ်ပစ္စည်းဥစ္စာချိုးဖောက်သည်, mesocortical / mesolimbic DA စနစ်၏လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့် Vivo အတွက် microdialysis, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်တိုးပွားလာပြီးနောက်ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ ဒါက DA ချို့တဲ့ '' ဖြည့်ဆည်း '' ဖို့ပိုမိုအားကောင်းဆုလာဘ်များရှာဖွေရန်တိုက်တွန်း (မဖြစ်မနေ) ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ PET ပုံရိပ်အားဖြင့်နာတာရှည်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများတွင် striatal D2 ကဲ့သို့သော receptors များ၏သရုပ်ပြမှု (သရုပ်ပြခြင်း)Volkow et al, 1999), DA လွှတ်ပေးရေးထပ်ခါတလဲလဲဆွပြီး dysregulated DA စနစ်၏အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ခြီးမွှောကျ postsynaptic DA ပြင်းအား, တုန့်ပြန်ချ-စည်းမျဉ်းအကြံပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့်အဘယ်အရာကို (တိုးလာ ventral ACC လှုပ်ရှားမှုမှဦးဆောင်တိုးလာ DA လွှတ်ပေးရန်အဖြစ်စတင်သည်နှင့်တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်ရှာကြံပညာရှိ 2002) ရလဒ် DA ချို့တဲ့ restore လုပ်ဖို့ဆုလာဘ်ဆွ၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ဆီသို့တစ်ဦး compulsive drive ကိုအဖြစ်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည် compulsive drive ကိုလစ်လပ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, အ orbitofrontal ဆက်စပ်, ventromedial prefrontal နှင့် ACC (အားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေမည်အကြောင်း,Adinoff, 2004) ။ သို့သော်ဤအယူအဆသတ်သတ်မှတ်မှတ် ICDs မှပြောပြတယ်သောအတိုင်းအတာတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်သည်။
INHIBITORY Controller, ဆုခမြ, AND DA ၏ယန္တရားပေါင်းစည်း
compulsive နှင့် Impulse ၏မော်ဒယ်များ ventral striatum / နျူကလိယနှင့်အတူ ventral ACC ဆက်သွယ်ထားသော ventral ကွင်းအတွင်းတုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ရှုထောင့်ကိုထိန်းညှိ VMPFC / OFC ဒေသများနှင့် DA သေံအတွက် 5-HT (2A, 2C) အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုအကြားချိန်ခွင်လျှာ positive ဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့်ထိန်းညှိ accumbens အပြုအမူ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် DA neurotransmission, အထူးသဖြင့် phasic လွှတ်ပေးရန်, ဆုလာဘ်ရှာခြင်းနှင့်အားဖြည့်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Schultz, 2002) ။ (မမျှော်လင့်ဘဲပြစ်ဒဏ် (ငွေကြေးအရှုံး) မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သင်ယူမှုအလယ်ပိုင်း dopaminergic လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးသို့ကျဆင်းလာမှုမှအဆိုပြုထားခဲ့ပြီးနဲ့မှိန်ဖျော့ဆုလာဘ်ရှာကြံပွင့်လင်းသော et al, 2007) ။ levo-dopa နှင့် pramipexole (D2 ကဲ့သို့ DA receptor agonist) အပါအ ၀ င် Pro-dopamanergic ဆေးများသည်မျှော်လင့်မထားသည့်ပြစ်ဒဏ်နှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါခံစားနေရသောလူနာများအတွက် ICDs များအားပြောင်းပြန်လေ့လာခြင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Cool, 2006; အေးချမ်းသော et al, 2006) ။ Pramipexole လည်း (phasic DA အချက်ပြဆုချမှဦးဆောင်လုပ်ရပ်များအားဖြည့်ဖို့သက်ဆိုင်ရာကြောင်းအကြံပြုဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီကျန်းမာသင်တန်းသားများအတွက်ဆုလာဘ်-related အပြုအမူ၏ချို့ယွင်းဝယ်ယူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Pizzagalli et al, 2008) ။ သို့သော်အခြားဒေတာ (ကျန်းကျန်းမာမာလူကြီးများမှအုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါ pramipexole, နှောင့်နှေး-လျှော့, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ, တုံ့ပြန်မှုတားစီး, ဒါမှမဟုတ် perserveration အပါအဝင်အပြုအမူ Impulse, compulsive, ဒါမှမဟုတ်ဆက်စပ်ဆောက်လုပ်ရေးပြောင်းလဲပစ်တော်မမူကြောင်းညွှန်ပြHamidovic et al, 2008) ။ ထို့အပွငျ olanzapine, DA receptors ၏ D2 တူသောအဲဒီ receptor မိသားစုမှာရန်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး, (ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူဘာသာရပ်များပါဝင်သောနှစ်ခုထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှုများတွင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာမှသာလွန်ပြသမရှိသေးပေFong သည် et al, 2008; McElroy et al, 2008), နှင့်အခြား D2 တူသောရန်, haloperidol, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လောင်းကစားဝိုင်း-related တွန်းအားနှင့်အပြုအမူတိုးမြှင့်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့ပြီး (Zack နှင့် Poulos, 2007) ။ Radioligand လေ့လာမှုများရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ pathophysiology အတွက် D3 နှင့် D2 receptors များအတွက်အလားအလာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှင်းလင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများရှိပြီးသား radioligands အဘို့အဆှဖှေဲ့မျှဝေသည်ဤ receptors ခြင်းဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေကြသည်။
အကောင့်ထဲသို့ထိုအတွေ့ရှိချက်ယူခြင်း, ပိုပြီးသုတေသနပြုသူတို့ကထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်စိတ်ရောဂါမမှန်ဆက်စပ်အဖြစ်ပိုကောင်း Impulse, compulsive နှင့် DA function ကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ Impulse သို့မဟုတ် compulsive မမှန်အလားအလာတစ် mesolimbic DA ချို့တဲ့ထံမှရယူထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် D2 တူသောရန်အချို့သော (OCD) တွင်တစ်ဦးကုထုံးအကျိုးကျေးဇူးကိုပြသပေမယ့်ထကြွလွယ်သောနှင့် / သို့မဟုတ် compulsive features တွေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ (ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း) မမှန်သည်အခြားကြပြီမဟုတ်။ အဲဒီ receptor-တိကျတဲ့ serotonergic နှင့် dopaminergic ligands သုံးပြီးတိကျတဲ့ထကြွလွယ်သောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောရောဂါများနှင့်အတူလူ့ဘာသာရပ်များအတွက် ventral နှင့် dorsal striatal circuitry နှစ်ဦးစလုံးစကားတွေဤအခြေအနေများကိုနားလည်အတွက်အရေးပါတဲ့နောက်ခြေလှမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာ circuitry အတွက် DA ဂီယာအပေါ် 5-HT2A နှင့် 2C ရန်များ၏သက်ရောက်မှုများလေ့လာစူးစမ်းဖို့အထူးစိတျဝငျစားဖြစ်နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေထိုကဲ့သို့သောလျော့ ventral striatal နှင့်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် SAS (အဖြစ်ထကြွလွယ်သောနှင့် compulsive features တွေ, မျှဝေမမှန်နှငျ့ပတျသကျသောလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးမြင်ကြ VMPFC activation အဖြစ်ရှုထောင့်သို့အပိုဆောင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုငျReuter et al, 2005; Potenza, 2007a).
ကျွန်ုပ်တို့၏ compulsive ၏အစောပိုင်းချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် (ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကြိုးစားမယ့်လေ့ / ကျပုံစံထုံးစံ၌ထပ်တလဲလဲပြုမူလုပ်ဆောင်တဲ့သဘောထားကို) နှင့်လက်ရှိချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် (ထိုကဲ့သို့သောဆုတ်ခွာအဖြစ်ဆန္ဒရှိအရေးပေါ်၏လျော့ချရေး) သဘောတရားဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, မူးယစ်ဆေးတွေကိုမှလေ့တုံ့ပြန်အလိုအလျောက်အလားအလာဆန္ဒရှိဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ရှေ့မှာရှောငျလှဲဖို့ယန္တရားအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်ပေမည်။ အစောပိုင်းကပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ်ဒေတာကို, အ dorsal striatum (ဥပမာအားဖြင့်များအတွက် caudate) ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဤလေ့သင်ယူမှုယန္တရားများ (သို့မဟုတ် compulsive) လင့်ထားသည်။ ပိုများသောမကြာသေးမီကအထောက်အထားများကိုယခု (ဆန္ဒရှိစိတ်ခွန်အားနိုးသင်ယူမှုဖို့ dorsal striatum (၎င်း၏ posterior အစိတ်အပိုင်း) ကိုဆက်သွယ်Seymour et al, 2007) ။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးအာရုံကြောရှုထောင့်ကနေသက်သေအထောက်အထား compulsive ဤနှစ်ခုသဘောတရားများအကြားတစ်ဦးထပ်တူထောက်ခံပါတယ်။
ထိရောက်မှုနှင့် 'အပြုအမူ' ထပ်တိုး
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် SAS အများအပြား features တွေမျှဝေပါ။ လက္ခဏာ profile များကို, ကျားမကွဲပြားမှု, သဘာဝသမိုင်းများ, နှင့်မိသားစုတို့ကိုလိုလားသောဆက်ဆံရေး (ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူမကြာခဏမမှန် Co-ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ပြပွဲတူညီပေးသနားခြင်းနှင့် Potenza, 2006) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်လုပ် SA functioning ဆင်းရဲအစီအမံတွေနဲ့ပတျသကျရာဆုလာဘ်-ဝတာဝန်များကို, (အပေါ် Impulse ၏မြင့်မားကိုပြသBechara, 2003) နှင့်ဆင်းရဲသားကိုကုသမှုရလဒ်ကို (Krishnan-Sarin et al, 2007), အရှင် SAS များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အခြား ICDs များအတွက်၏အခြင်းတန်ဖိုးကိုရှိနိုင်ပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, ventral striatum နှင့် VMPFC ၏အတော်လေးလျော့နည်းသွား activation ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အခြား Paradigm (အတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ပြီးအဖြစ် Neurocognitive နှင့် fMRI ဒေတာ, အရာအတွက်, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် SAS ရှယ်ယာအလားတူအာမခံ neurocircuitry အကြံပြုPotenza et al, 2003a, 2003b) ။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း ventral striatum ၏ပုံမှန်မဟုတ်သော fMRI activation လုပ် SA နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏မိသားစုများအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးဒီအယူအဆရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း probands ၏ထိခိုက်ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်တိုက်ရိုက်စာမေးပွဲလိုအပ်ပါတယ်ပေမယ့်, စွဲလမ်းမမှန်များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ endophenotype ကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ထကြွလွယ်သောလေ့ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်တုံ့ပြန်နှင့်လုပ် SA အပြုအမူတစ်ခုထက်ပိုသော compulsive ပုံစံဆီသို့ပြောင်းရွှေ့စေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်အိမ်နီးချင်းအပြိုင်နှင့် ပို. ပို. dorsal, cortico-striatal ကွင်း၏တိုးတက်သောစုဆောင်းမှု (ကတွေအကြောင်းထုံးစံ၌ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတွေးဆထားသည်ဘရူနှင့် Potenza, 2008(မျောက်အတွက်ဖော်ထုတ်ပီပီလိမ် striato-nigrostriatal circuitry ၏) ဆင်တူLynd-Balta နှင့် Haber, 1994) နှင့်ကြွက် (ဘီးလင်း et al, 2008striatum dorsal မှ ventral ထံမှကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များပုံဖော်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ၏) မော်ဒယ်များ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတစ်ဦးချင်းစီအတွင်းကဤအပြောင်းအလဲများကိုသိကောင်းစရာများနှင့်ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်လိမ့်မည်အပြီးတွင်အလားအလာ, longitudinal လေ့လာမှုများ။ opioid ရန် (နှင့်အတူရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုကုသရာမှသုတေသနကတိပေးဘရူ et al, 2008) (ထိုကဲ့သို့သော naloxone အဖြစ် opioid ရန် OCD ပိုဆိုးအောင်ပြခဲ့ကြသည့်အတွက်, OCD ကနေရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းခွဲခြားမှုမသာInsel နှင့် Pickar, 1983), ဒါပေမယ့်လည်းအခြားဆက်စပ် ICDs အတွက် opioid ရန်များအတွက်ကုထုံး function ကိုအကြံပြု (ဂရန် et al, 2007).
Impulsivity နှင့် compulsivity ၏ neurobiology နှင့်ကုသမှုအသစ်များဖွံ့ဖြိုးရန်အလားအလာများကိုအပြည့်အဝနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးထားသောအာရုံကြောဆိုင်ရာ circuit မ်ားအား insula ကဲ့သို့သောအခြားအာရုံကြောဆိုင်ရာတည်ဆောက်ပုံများကိုလေ့လာရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ အချက်အလက်များအရ insula သည် 'သတိ' သောတိုက်တွန်းမှုများကိုညှိနှိုင်းရာတွင်အရေးကြီးကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်လေဖြတ်ပြီးနောက်အင်ဆူလာ၏တွေ့ရှိမှုသည်လျင်မြန်စွာဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Naqvi et al, 2007) ။ ပတ် ၀ န်းကျင်အတွင်းရှိအချက်များသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ခြင်းကဲ့သို့သော homeostatic အခြေအနေများသည်အင်ဆူလာရှိသတိထားမိသည့် 'တိုက်တွန်းမှု' အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသော 'interoceptive' ကိုယ်စားပြုမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါ insula ခန္ဓာဗေဒနှင့် function impulsivity, compulsivity နှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့်ဖျောပွအာရုံကြောစနစ်များကိုချိတ်ဆက်ထားသည်။ နားလည်နိုင်သည်မှာ insula သည်ပတ် ၀ န်းကျင်မှဖြစ်စေ viscera မှအချက်အလက်များကို 5-HT 2C သို့ထပ်ဆင့်လွှင့်ခြင်းဖြင့် impulivity နှင့် compulsivity ၏ယန္တရားများနှင့်ဆက်သွယ်သည်။ vs အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက် 5-HT 2A receptors ။ ထို့ကြောင့် insula မှတစ်ဆင့်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးသောအချက်ပြမှုများသည်တဘက်တွင် impulsivity (သို့) compulsivity အားမောင်းနှင်နေသောအာရုံကြောဆားကစ်များကိုအာရုံခံနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, insula လှုပ်ရှားမှု prefrontal cortex ၏ inhibitory- ထိန်းချုပ်မှုယန္တရားများ 'သိမ်းယူ' နှင့် subvert အာရုံစူးစိုက်မှု, ဆင်ခြင်ခြင်း, စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်စဉ်များလိမ့်မည် ကွာ ပေးထားသောလုပ်ဆောင်ချက်၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ ရှိ. မှ၎င်း, ဆီသို့ ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးအဖြစ်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုရှာရယူဖို့ရေးဆွဲရာတွင်အစီအစဉ်များ (Naqvi et al, 2007).
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုံ့ဆျောမေးခွန်းများဖြစ်လျှင်, ပြန်လာ: (ဈ) မည်မျှ compulsive နှင့် Impulse သည်ဤရောဂါမှအထောက်အကူဖြစ်စေပါဘူး, (ii) အဘယျအတိုငျးအတာအထိသူတို့ shared သို့မဟုတ်သီးခြားအာရုံကြော circuitry အပေါ်မူတည်ပါဘူးရန်, (iii) ဖြန်ဖြေ monoaminergic ယန္တရားများဘာတွေလုပ်နေလဲ, ( ဃ) ထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ် compulsive အပြုအမူအစိတ်အပိုင်းများကိုကုသမှုနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်၏အခြင်းတန်ဖိုးပါဘူး, နှင့် (v) ကိုဒေတာကိုက်ညီတဲ့စညျးလုံးရှုထောင်မော်ဒယ်ရှိသလော ရရှိနိုင်သောသက်သေအထောက်အထား, Impulse နှင့် compulsive အဆိုအရ, တစ်ဦးချင်းစီ multidimensional ဖြစ်နှင့်မမှန်ထပ်, ဒါပေမယ့်လည်းကွဲပြား profile များကိုပြသပေမယ့်, အထကြွလွယ်သောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောရောဂါများအနည်းဆုံးအချို့အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်ပုံရသည်။ တချို့မမှန်များအတွက်ဒေတာ tantalizingly မပြည့်စုံသေးသော်လည်းထို့ကြောင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှု cortico-striatal neurocircuitry စညျးမဉျြးဥပရှုထောင့်အတွင်းကျယ်ပြန်မအောင်မြင်မှုများ, ပြန်လည်သုံးသပ်အောက်မှာလူအပေါင်းတို့သည်မမှန်၏သိမြင်မှုနှင့်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအထူးသဖြင့် VMPFC နှငျ့ပတျသကျသောဆင်းရဲသောဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော ventral cortico-striatal circuitry ဆက်စပ် Impulse နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်သော်လည်း Trichotillomania, မော်တာ-ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုဟာ RIF cortex အတွင်းနှင့်၎င်း၏ cortico-subcortical ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုရောဂါအဖြစ်မပါဘဲရပ်နေစေခြင်းငှါ နှင့် ventral striatum, ထို SAS နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာကဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆုလာဘ်-related Impulse ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်း SAS အဘို့ဆင်းရဲသားတို့ကိုကုသမှုရလဒ်ကိုနှင့်အတူပတျသကျနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အခြား ICDs များအတွက်၏အခြင်းအဓိပ်ပာယျရှိနိုင်ပါသည်။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အတူဖြစ်ပေါ် compulsive အပြုအမူတွေ ventral ဆုလာဘ် circuitry အလားတူမူမမှန်သူနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ OCD, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ယူဆရ OFC-caudate circuitry ၏နှောင့်အယှက်အဖြစ် VLPFC, RIF cortex, cingulate နှင့် parietal ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့, မော်တာ Impulse နှင့် compulsive ပြသထားတယ်။ ထိုအပုံမမှန်အဘို့, အချင်းချင်းသက်ဆိုင်သော serotonin, DA နှင့် noradrenaline စီမံချက်များသေးမလုံလောက်မှု, သွင်ပြင်လက္ခဏာအဖြစ်အရေးကြီးသော Module လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအဖြစ်အခြားစနစ်များရှိသည်ဖို့များပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, Impulse compulsive နှင့်အပြန်အလှန်သို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်ပုံသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်ရှိသော impulsivity နှင့် compulsivity ပါ ၀ င်သည့်ရိုးရှင်းသော linear diathesis နှင့်မဝေးလှပါ။ 'model' သည်ဤ circuit များနှင့် disorders အမျိုးမျိုးတွင်ဖော်ပြသောရှုပ်ထွေးသော orthogonally ဆက်စပ် diatheses များ၏ရှုပ်ထွေးသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထကြွလွယ်သောနှင့် compulsive မမှန်မှုများသည်သိသိသာသာသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနေပြီး impulsivity နှင့် compulsivity ၏ရှုထောင့်များကိုမျှဝေကာ ပို၍ ပင်ရှုပ်ထွေးလာပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသည်။ ဥပမာ - ထကြွလွယ်သောနှင့်စွဲလမ်းစေသောရောဂါများအတွက်ဆုပေးရန်သည်းခံမှုသည်တိုးတက်လာနိုင်ပြီးအပြုအမူများသည်အဆင်မပြေမှုကိုလျှော့ချရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သည်။ compulsive disorders ၏ထပ်ခါတလဲလဲပြုမူသောအပြုအမူများစွမ်းဆောင်ရည်သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုအားဖြည့်လာနိုင်သည် (ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ပိုမိုထိုးထွင်း။ မောင်းနှင်လာသည်) ။ ဤရောဂါများကိုသဘောတူလက်ခံထားသော endophenotypic marker များ အသုံးပြု၍ ပုံဖော်ခြင်းသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုပိုမိုရှင်းလင်းစေပြီး ထပ်မံ၍ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောစင်တာများရှိအနာဂတ်သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုအားပေးသင့်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကဲ့သို့သော 'triangulating' ချဉ်းကပ်မှုများမှတစ်ဆင့်လုံလောက်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အသစ်သောချဉ်းကပ်မှုများလိုအပ်နိုင်သည်။ ဤအမှု၌, (မျိုးစုံအပြုအမူနှင့်ပုံရိပ် variable တွေကို၏စူးစမ်းခွင့်ပြုထားတဲ့) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနည်းဆုံးရင်ပြင်၏နည်းလမ်းအဖြစ် neuroimaging ဒေတာအတွက် ဦး နှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့စနစ်များ, ဖော်ထုတ်များအတွက်နည်းစနစ်, ဒီလယ်ပြင်၌အနာဂတ်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအဖြစ်သိသာထင်ရှားသောအလားအလာရှိနိုင်ပါသည်။ ကြွက်များ (ဥပမာ - ၅-CSRTT နှင့်ပြောင်းပြန်လေ့လာခြင်း) စသည့်လုပ်ငန်းများကိုအတူတကွ transgene mouse ဖြင့်ပြင်ဆင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် compulsive နှင့် impulsive အပြုအမူအားထိန်းချုပ်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သော receptor ယန္တရားများကိုခွဲထုတ်ခြင်းတွင်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ pharmacological ligands အသစ်သုံးပြီး HT receptors ။
ဒေါက်တာ Fineberg Lundbeck, Glaxo-Smith က Kline, Servier နှင့် Bristol က Myers Squibb ဘို့တိုင်ပင်တော်မူပြီ Lundbeck, Glaxo-SmithKline, Astra Zeneca, Wellcome ကနေသုတေသနပြုထောက်ခံမှုရရှိထား; honoraria လက်ခံရရှိပြီး Janssen, ဂျက်ဇ်ဂီတ, Lundbeck, Servier, Astra Zeneca, Wyeth ထံမှသိပ္ပံနည်းကျအစည်းအဝေးတွေမှာသင်ကြားရန်ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Potenza သည်အကြံဥာဏ်ပေးပြီး Boehringer Ingelheim ကိုအကြံပေးသည်။ Somaxon တွင်အကြံဥာဏ်များပေးခြင်းနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများရှိခြင်း၊ တာဝန်ရှိသည့်လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားစင်တာနှင့်လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါဆိုင်ရာသုတေသနဌာနနှင့် Glaxo-SmithKline၊ သစ်တောဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ Ortho-McNeil နှင့် Oy-Control / Biotie တို့မှအမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာန၊ စစ်ပြန်အုပ်ချုပ်ရေး၊ Mohegan Sun Casino၊ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာန၊ ဆေးဝါး၊ မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၊ ICDs သို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သောစစ်တမ်းများ၊ စာပို့ခြင်းသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ICDs နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်ဥပဒေရုံးများနှင့်ဖက်ဒရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရုံးတို့နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနနှင့်အခြားအေဂျင်စီများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေပြန်လည်သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ CME ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားလက်တွေ့သို့မဟုတ်သိပ္ပံဆိုင်ရာနေရာများတွင်ပညာသင်ကြားခွင့်ရခဲ့သည်။ guest ည့်သည်တည်းဖြတ်သည့်ဂျာနယ်များအပိုင်းများ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးကျမ်းကိုထုတ်ဝေသူများအတွက်စာအုပ်များသို့မဟုတ်စာအုပ်အခန်းများကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နှင့် Connecticut စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်စွဲဝန်ဆောင်မှုများပြProbleနာလောင်းကစား ၀ န်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တွင်လက်တွေ့စောင့်ရှောက်မှုပေးသည်။ ဒေါက်တာ Chamberlain ကင်းဘရစ်သိမှတ်ခံစားမှု, Shire နှင့် P1Vital များအတွက်ဆှေးနှေး။ ဒေါက်တာ Menzies ကင်းဘရစ် Enterprise Limited, ကင်းဘရစ်, ကင်းဘရစ်, ဗြိတိန်တက္ကသိုလ်နှင့်ကျပ Bioscience, Inc San Diego မှအကြားဤဆောင်းပါး၏အကြောင်းအရာကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းမနည်းပညာလွှဲပြောင်းခြင်းမှရရှိလာတဲ့ဘဏ္ဍာရေးလျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Bechara Par, Inc ကနေအိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson အားလက်ခံတွေ့ဆုံ ဒေါက်တာ Sahakian CeNeS အတွက်ရှယ်ယာများရရှိထားသူ; ကင်းဘရစ်သိမှတ်ခံစားမှု, Novartis, Shire, GlaxoSmithKline နှင့် Lilly ဘို့တိုင်ပင်တော်မူပြီ နှင့်မက်ဆာချူးဆက်အထွေထွေဆေးရုံကြီး (CME ခရက်ဒစ်) မှာ Schizophrenia နှင့်စိတ်မူမမှန် (2007) တွင်သိမှုအလုပ်မဖြစ်အပေါ်နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာစကားပြောဘို့ Psychiatry အတွက်ခမ်းနားကျည်အဘို့အ honoraria လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Robbins ကင်းဘရစ်သိမှတ်ခံစားမှု, အီးဘို့ဆှေးနှေး Lilly, GlaxoSmithKline နှင့် Allon ဟော်မုန်း။ ဒေါက်တာ Bullmore GlaxoSmithKline (50%) နှင့်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ် (50%) ၏ဝန်ထမ်းနှင့် GlaxoSmithKline အတွက်ရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ Bullmore ကင်းဘရစ် Enterprise Limited, ကင်းဘရစ်, ကင်းဘရစ်, ဗြိတိန်တက္ကသိုလ်နှင့်ကျပ Bioscience, Inc San Diego မှအကြားဤဆောင်းပါး၏အကြောင်းအရာကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းမနည်းပညာလွှဲပြောင်းခြင်းမှရရှိလာတဲ့ဘဏ္ဍာရေးလျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Holland Somaxon, Neuropharm, Transcept နှင့် Nastech ဖို့တိုင်ပင်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Holland ဥပဒရုံးတွေမှတိုင်ပင်နှင့် Mirapex ကုန်ပစ္စည်းတာဝန်ဝတ္တရားအမှု၌သက်သေခံလျက်ရှိသည်။ သူကကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes, အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု, Schizophrenia အတွက်သုတေသနများအတွက်အမျိုးသားမဟာမိတ်အဖွဲ့များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေ Disorders ၏ကျောင်းဆောင်ကုန်ပစ္စည်းများ Division မှသုတေသနထောက်ခံမှုရရှိထား, Autism, အ Seaver Foundation မှတိုက်တွန်းနှင့် Solvay, Oy ကို Contral နှင့် Somaxon ။ ဤလုပ်ငန်းကိုဒေါက်တာ Robbins, ဒေါက်တာ Sahakian, BJ Everitt နှင့် AC အရောဘတ်တစ် Wellcome Trust မှအစီအစဉ် Grant က (076274 / Z ကို / 04 / Z ကို) ကအစိတ်အပိုင်းအတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါအပြုအမူများနှင့်လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံအင်စတီကျုဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီ (အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေက) နှင့် Wellcome Trust မှ (G001354) မှပူးတွဲချီးမြှင့်ကထောက်ခံသည်။ Schizophrenia နှင့်စီးပွားပျက်ကပ်အပေါ်သုတေသန (RG37920 ဒေါက်တာ Bullmore မှသုတေသနဆုကို Distinguished) အတွက်အမျိုးသားမဟာမိတ်အဖွဲ့သည် Harnett ရန်ပုံငွေအဖွဲ့နဲ့ James Baird ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်) နှင့်လက်တွေ့ဆေးပညာတက္ကသိုလ်ကိန်းဘရစ်ကျောင်း, ဒေါက်တာရန် (MB / ပါရဂူဘွဲ့ studentship ကထောက်ခံ Menzies), နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီ (ဒေါက်တာ Chamberlain မှကို MB / ပါရဂူဘွဲ့ studentship) ။ ဒေါက်တာ Bechara ကျန်းမာရေးအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Institute (NIDA R01 DA023051, DA11779, DA12487 နှင့် DA1670), (NINDS P01 NS019632) မှထောက်ပံ့ငွေထောက်ခံမှုအားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့်အမျိုးသားသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်း (NSF IIS 04-42586) ။ DA019039, DA020908, DA015757, DA020709 s; R37 DA15969; RL1 AA017539; P50 s DA09241, AA12870, AA015632), VA (VISN1 MIRECC and REAP) နှင့် Yale ရှိအမျိုးသမီးကျန်းမာရေးသုတေသန။ ဒေါက်တာ Robbins သည် pfizer အတွက်တိုင်ပင်သည်။ ဒေါက်တာ Menzies သည် ၈ ကြိမ်မြောက်စိတ်ပညာဆိုင်ရာသုတေသနဆိုင်ရာညီလာခံတွင်တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းနှင့်ယူကေအစိုးရ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်းအနှီးနှင့်သာယာဝပြောရေးတို့အတွက်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဂုဏ်ပြုဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
Adinoff ခ Neurobiologic မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များနှင့်စွဲလမ်းထဲမှာ process လုပ်တယ်။ Harv ဗြာစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 12: 305-320 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Aron AR, Dowson JH, Sahakian BJ, Robbins TW ။ Methylphenidate အာရုံကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါနှင့်အတူလူကြီးများအတွက်တုန့်ပြန်တားစီးတိုးတက်ကောင်းမွန်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 54: 1465-1468 ။ [PubMed]
Aron AR, Poldrack RA ။ တုန့်ပြန်တားစီး၏သိမြင်မှုမှ neuroscience: အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါအတွက်မျိုးဗီဇသုတေသနအတွက်ဆီလျော်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 57: 1285-1292 ။ [PubMed]
Baxter LR, Jr က Phelps ME, Mazziotta JC, Guze BH, Schwartz JM, Selin အီး။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက်ဒေသခံနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းထားများ။ ရပ်များမှာတစ်ဘက်စွန်းစိတ်ကျရောဂါနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်နှုန်းထားများနှင့်အတူတစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1987; 44: 211-218 ။ [PubMed]
Bechara အေအန္တရာယ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်း: စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်စွဲလမ်း။ J ကို Gamble လုံး။ 2003; 19: 23-51 ။ [PubMed]
Bechara တစ်ဦးက, Damasio AR, Damasio H ကို, Anderson က SW ။ လူ့ prefrontal cortex ပျက်စီးမှုအောက်ပါအနာဂတ်အကျိုးဆက်များမှအာရုံမခံစားနိုင်သော။ သိမှတ်ခံစားမှု။ 1994; 50: 7-15 ။ [PubMed]
ဘာလင် HA, Hamilton က H ကို, Holland အီး Neurocognition နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်စိတ်ထား။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်းညီလာခံပိုစတာ: ​​ဝါရှင်တန်ဒီစီ; 2008 ။
ဘာလင် HA, Rolls ET, Kischka U. Impulse, အချိန်အမြင်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် orbitofrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာအတွက်အားဖြည့် sensitivity ကို။ ဦးနှောက်။ 2004; 127 (Pt 5: 1108-1126 [။PubMed]
Blanco, C, Potenza MN, Kim က SW, Ibanez တစ်ဦးက, Zaninelli R ကို, Saiz-Ruiz J ကို, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် Impulse နှင့် compulsive ၏တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးလေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2009; 167: 161-168 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bloch MH, Landeros-Weisenberger တစ်ဦးက, Kelmendi B, Coric V ကို, Bracken ကို MB, Leckman JF ။ တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်: ကုသမှုဆန့်ကျင်ဘက် obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်အတူ antipsychotic တိုးပွား။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 11: 622-632 ။ [PubMed]
et al Bohlhalter S က, Goldfine တစ်ဦးက, Matteson S က, Garraux, G, Hanakawa T က, Kansaku K သည်။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI လေ့လာမှု: အာရုံကြော Tourette syndrome ရောဂါအတွက်နေကြပါပြီမျိုးဆက်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ဦးနှောက်။ 2006; 129 (Pt 8: 2029-2037 [။PubMed]
Boulougouris V ကို, Dalley JW, Robbins TW ။ ကြွက်များတွင်လေ့လာသင်ယူအမှတ်စဉ် Spatial မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်အပေါ် orbitofrontal, infralimbic နှင့် prelimbic cortical ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2007; 179: 219-228 ။ [PubMed]
Boulougouris V ကို, Glennon JC, Robbins TW ။ ကြွက်များတွင်လေ့လာသင်ယူအမှတ်စဉ် Spatial မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်အပေါ်ရွေးချယ် 5-HT2A နှင့် 5-HT2C အဲဒီ receptor ရန်၏ Dissociable ဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 2007-2019 ။ [PubMed]
ဘရူဂျာ Grant က je, Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှု။ စွဲခြင်းရောဂါဆက်ဆံပါ။ 2008; 7: 1-14 ။
ဘရူဂျာ Potenza MN ။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်ခြင်း၏ neurobiology နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ: မူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းမှဆက်ဆံရေး။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Pharmacol ။ 2008; 75: 63-75 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, ဘလက်ဝဲလ်အေဒီ, Fineberg NA, Robbins TW, Sahakian BJ ။ obsessive compulsive ရောဂါ၏ neuropsychology: ကိုယ်စားလှယ်လောင်း endophenotypic အမှတ်အသားများအဖြစ်သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတားစီးအတွက်ဆုံးရှုံးမှု၏အရေးပါမှုကို။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2005; 29: 399-419 ။ [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, ဘလက်ဝဲလ်အေဒီ, Fineberg NA, Robbins TW, Sahakian BJ ။ obsessive-compulsive ရောဂါနှင့် trichotillomania အတွက်မဟာဗျူဟာအကောင်အထည်ဖော်ရေး။ Psychol Med ။ 2006a; 36: 91-97 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, et al Del Campos N ကို, Dowson J ကို, Muller ဦး, Clark က L ကို, Robbins TW ။ Atomoxetine အာရုံကိုလိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါနှင့်အတူလူကြီးများအတွက်တုန့်ပြန်တားစီးတိုးတက်လာသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007a; 62: 977-984 ။ [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, Fineberg NA, ဘလက်ဝဲလ်အေဒီ, Clark က L ကို, Robbins TW, Sahakian BJ ။ obsessive-compulsive ရောဂါနှင့် trichotillomania တစ် neuropsychological နှိုင်းယှဉ်။ Neuropsychologia ။ 2007b; 45: 654-662 ။ [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, Fineberg NA, ဘလက်ဝဲလ်အေဒီ, Robbins TW, Sahakian BJ ။ မော်တော်တားစီးနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါနှင့် trichotillomania အတွက်သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006b; 163: 1282-1284 ။ [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, Fineberg NA, Menzies LA က, ဘလက်ဝဲလ်အေဒီ, Bullmore ET, Robbins TW, et al ။ obsessive-compulsive ရောဂါလူနာများ၏ထိခိုက်ပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်မော်တာတားစီးချို့ယွင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007c; 164: 335-338 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, obsessive-compulsive ရောဂါ Menzies အယ်လ် Endophenotypes: ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်, သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အနာဂတ်အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူဗြာ Neurother ။ 2009; 9: 1133-1146 ။ [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, Menzies L ကို, Hampshire ပြည်နယ်တစ်ခု, et al နို့စို့ J ကို, Fineberg NA, del Campos N ကို။ obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်၎င်းတို့၏ထိခိုက်ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်အတူလူနာအတွက် Orbitofrontal ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ သိပ္ပံ။ 2008a; 321: 421-422 ။ [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, Menzies L ကို, Sahakian BJ, Fineberg NA ။ trichotillomania အပေါ်ကုလားကာရုတ်သိမ်းရေး။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007d; 164: 568-574 ။ [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, Menzies LA က, Fineberg NA, et al Del Campos N ကို, နို့စို့ J ကို, Craig K သည်။ trichotillomania အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စမူမမှန်: morphometric သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008b; 193: 216-221 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, Muller ဦး, ဘလက်ဝဲလ်အေဒီ, Clark က L ကို, Robbins TW, Sahakian BJ ။ လူသားတွေအတွက်တုန့်ပြန်တားစီးနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာသင်ယူမှု၏ Neurochemical မော်ဂျူ။ သိပ္ပံ။ 2006c; 311: 861-863 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, Muller ဦး, et al Deakin JB, Corlett PR စနစ်, Dowson J ကို, Cardinal R ကို။ ကျန်းမာအထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ် buspirone ၏ deleterious သက်ရောက်မှုမရှိခြင်း။ J ကို Psychopharmacol ။ 2006d; 21: 210-215 ။ [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, Robbins TW, Sahakian BJ ။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ၏ neurobiology ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007e; 61: 1317-1319 ။ [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, Sahakian BJ ။ Impulse ၏ neuropsychiatry ။ Curr Opin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 20: 255-261 ။ [PubMed]
ကုန်သည်များက MS, Atack JR, ကားလင်း RW, Collinson N ကို, ကွတ်ခ်သည် SM, Dawson ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, et al ။ ဂိဗာမွို့ alpha5 ၏ benzodiazepine site ကိုမှာနှုတ် bioavailable, function ရွေးချယ်ပြောင်းပြန် agonist သိမှတ်ခံစားမှုတိုးမြှင့်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ receptors ။ J ကို Med Chem ။ 2004; 47: 5829-5832 ။ [PubMed]
Chou-အစိမ်းရောင် JM, Holscher TD, Dallman MF, Akana SF ။ အဆိုပါ 5-HT2C အဲဒီ receptor နောက်ကောက် mouse ကိုအတွက် compulsive အပြုအမူ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2003; 78: 641-649 ။ [PubMed]
Clark က L ကို, Robbins TW, Ersche KD, Sahakian BJ ။ လက်ရှိနှင့်ယခင်ပစ္စည်းဥစ္စာသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်မှု Impulse ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 60: 515-522 ။ [PubMed]
Clark က L ကို, Roiser JP, Cool R ကို, Rubinsztein, DC, Sahakian BJ, Robbins TW ။ ရပ်တန့် signal ကိုတုန့်ပြန်တားစီး tryptophan လျော့ကျသို့မဟုတ်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် serotonin Transporter polymorphic အားဖြင့် modulated မဟုတ်ပါ: Impulse ၏ 5-HT သီအိုရီအဘို့အဂယက်ရိုက်။ Psychopharmacology (Berl) 2005; 182: 570-578 ။ [PubMed]
Clarke HF, Dalley JW, Crofts HS, Robbins TW, Roberts သည် AC အ။ prefrontal serotonin ကွယ်ပျောက်သွားပြီးနောက်သိမှုတရားရှိဖို့။ သိပ္ပံ။ 2004; 304: 878-880 ။ [PubMed]
Clarke HF, Walker က SC, Crofts HS, Dalley JW, Robbins TW, Roberts သည် AC အ။ Prefrontal serotonin ကွယ်ပျောက်သွားမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လေ့လာသင်ယူသော်လည်းမအာရုံကို set ကိုရွေ့ပြောင်းသက်ရောက်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 532-538 ။ [PubMed]
Clarke HF, Walker က SC, Dalley JW, Robbins TW, Roberts သည် AC အ။ prefrontal serotonin ကွယ်ပျောက်သွားပြီးနောက်သိမှုတရားရှိဖို့အပြုအမူနှင့် neurochemically တိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Cereb Cortex ။ 2007; 17: 18-27 ။ [PubMed]
ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် L-DOPA ကုသမှုကိုသိသော function-implications ၏ R. Dopaminergic modulation Neurosci Biobehav ဗျာ 2006; 30: 1-23 ။ [PubMed]
ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် Cools R, Altamirano L, D'Esposito M. ပြောင်းပြန်လေ့လာခြင်းသည်ဆေးဝါးအခြေအနေနှင့်ရလဒ်ထွက်ပေါ်လာမှုအပေါ်မူတည်သည်။ Neuropsychologia ။ 2006; 44: 1663-1673 ။ [PubMed]
Cottrell S က, Tilden: D, et al ရော်ဘင်ဆင် P ကို, ဘေဂျေ, Arellano J ကို, Edgell အီး။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါနှင့်အတူသားသမီးများ၏ကုသမှုလှုံ့ဆော်ကုထုံးနှင့်အတူ atomoxetine နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးကလုပ်ပါတယ်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်။ Value ကိုကနျြးမာရေး။ 2008; 11: 376-388 ။ [PubMed]
ခရော S က, Channon က S, Robertson က MM ။ Tourette ၏ရောဂါ - အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတားစီးမှု၊ မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းစသည်တို့အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်။ J ကိုကလေးစိတ်ရောဂါစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 46: 1327-1336 ။ [PubMed]
Crosby J ကို, မိသားစု ADHD များအတွက်အမှတ်အသားအဖြစ် Schachar R. ချို့တဲ့တားစီး။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158: 1884-1890 ။ [PubMed]
Denis: D, ဇော J ကို, Westenberg HG ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို: preclinical နှင့်လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထား။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 65 (ပျော့ပျောင်း 14: 11-17 [။PubMed]
Dias R ကို, Robbins TW, Roberts သည် AC အ။ ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆိုင်း၏ prefrontal cortex အတွက် Dissociation ။ သဘာဝ။ 1996; 380: 69-72 ။ [PubMed]
အစဉ်အဆက်ကို EA, Cool R ကို, Clark က L ကို, et al ဗန် der Veen FM ရေ, Jolles J ကို, Sahakian BJ ။ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လေ့လာသင်ယူမှုအတွက်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်စဉ်အတွင်း prefrontal cortex ၏ Serotonergic မော်ဂျူ။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 1138-1147 ။ [PubMed]
Fineberg NA, Gale TM အလိုအလျောက်။ obsessivecompulsive ရောဂါ၏သက်သေအထောက်အထားများ-based pharmacotherapy ။ int J ကို Neuropsychopharmacol ။ 2005; 8: 107-129 ။ [PubMed]
Fineberg NA, Saxena က S နဲ့, ဇော J ကို, Craig KJ ။ 2007a ။ obsessive-compulsive ရောဂါ: နယ်နိမိတ်ကိစ္စများ CNS Spectr 12359-364.364367-375 ။ [PubMed]
Fineberg NA, Sharma က: P, Sivakumaran T က, Sahakian B, Chamberlain SR ။ obsessive-compulsive ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါကို obsessive-compulsive ရောင်စဉ်အတွင်းပိုင်ပါဘူး။ CNS Spectr ။ 2007b; 12: 467-482 ။ [PubMed]
Fineberg NA, Sivakumaran T က, ရောဘတ်တစ်ဦးက, Gale တီကုသမှု-ခံနိုင်ရည် obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် SRI ကိုမှ quetiapine ထည့်သွင်းခြင်း: တစ် randomized ထိန်းချုပ်ကုသမှုလေ့လာမှု။ int Clin Psychopharmacol ။ 2005; 20: 223-226 ။ [PubMed]
Fong သည် T-, Kalechstein တစ်ဦးက, Bernhard B, Rosenthal R ကို, Rugle အယ်လ်ကိုဗီဒီယိုဖဲချပ်ဝေရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ၏ကုသမှုများအတွက် olanzapine ၏တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008; 89: 298-303 ။ [PubMed]
ဖရန့် MJ, Moustafa AA ကို, Haughey HM, Curran T က, ဟက် Ke ။ မျိုးရိုးဗီဇသုံးဆ dissociation အားဖြည့်သင်ယူမှုအတွက် dopamine အဘို့အမျိုးစုံအခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2007; 104: 16311-16316 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Garraux, G, Goldfine A, Bohlhalter S, Lerner A, Hanakawa T, Hallett M. Tourette ၏ရောဂါတွင် midbrain မီးခိုးရောင်ကိစ္စတိုးလာသည်။ Ann Neurol 2006; 59: 381-385 ။ [PubMed]
Gottesman II ကို, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင် TD ။ Psychiatry အတွက် endophenotype အယူအဆ: အင်္ဂလိပ်နှင့်မဟာဗျူဟာရည်ရွယ်ချက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 160: 636-645 ။ [PubMed]
je, Odlaug BL, Potenza MN ပေးသနား။ ဆွဲဆံပင်စွဲ? ဘယ်လို trichotillomania တစ်ခုအခြားမော်ဒယ်ကုသမှုရလဒ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေနိုင်သည်။ Harv ဗြာစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 15: 80-85 ။ [PubMed]
je, Potenza MN ပေးသနား။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်၏ compulsive ရှုထောင့်။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်မိပါတယ်။ 2006; 29: 539-551 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hamidovic တစ်ဦးက, Kang UJ, အနိမ့်၏က de ကျေးအိပ်ချ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် Impulse နှင့်သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ် pramipexole ၏စူးရှသောဆေးများအလယ်အလတ်ရန်။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2008; 28: 45-51 ။ [PubMed]
Hampshire ပြည်နယ်တစ်ခု, Owen လေး။ အဖြစ်အပျက်-ဆက်စပ် fMRI သုံးပြီးအာရုံကိုထိန်းချုပ် Fractionating ။ Cereb Cortex ။ 2006; 16: 1679-1689 ။ [PubMed]
Harrison AA ကို, Everitt BJ, Robbins TW ။ ဗဟို 5-HT လျော့ကျအာရုံစူးစိုက်မှုကိုစွမ်းဆောင်ရည်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲတုံ့ပြန်ထကြွလွယ်သောပိုကောင်းစေပါတယ်: dopaminergic ယန္တရားများနှင့်အတူ interaction က။ Psychopharmacology (Berl) 1997; 133: 329-342 ။ [PubMed]
et al Hatcher PD, ဘရောင်း VJ, ထိုက် DS, Bates က S, Overend P ကို, Hagan JJ ။ 5-HT6 အဲဒီ receptor ရန်ကြွက်များတွင်တာဝန်ပြောင်းလဲကာအာရုံစူးစိုက်မှုအစုအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ Psychopharmacology (Berl) 2005; 181: 253-259 ။ [PubMed]
Holland, E, ဘာလင် HA, Bartz J ကို, Anagnostou အီး, Pallanti S ကိုရှိမောငျ: D, et al ။ 2007a ။ အဆိုပါထကြွလွယ်သော-compulsive ရောင်စဉ်: neurocognitive, အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်နှင့်ကုသမှုတွေ့ရှိချက် phenotype ACNP presentationScientific abstraction ACNP 2007 နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး, p50 အကြောင်းကြား။
Holland, E, Cohen ကို LJ ။ Impulse နှင့် compulsive ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါစာနယ်ဇင်း Inc မှ, ဝါရှင်တန်ဒီစီ, 1996 ။
et al Holland, E, DeCaria ကို C, Gully R ကို, Nitescu တစ်ဦးက, Suckow RF, Gorman JM ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် Meta-chlorophenylpiperazine မှအမူအကျင့်များနှင့် neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုအပေါ်နာတာရှည် fluoxetine ကုသမှုဆိုးကျိုးများ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 1991a; 36: 1-17 ။ [PubMed]
Holland, E, DeCaria ကို C, Nitescu တစ်ဦးက, Cooper က T က, Stover B, et al Gully R ကို။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် Noradrenergic function ကို: clonidine ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ဖို့အမူအကျင့်များနှင့် neuroendocrine တုံ့ပြန်မှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 1991b; 37: 161-177 ။ [PubMed]
Holland E ကိုကင်မ်က S, Khanna က S, Pallanti အက်စ် obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive spectrum ကိုမမှန်: အဖြေရှာတဲ့နှင့်ရှုထောင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။ CNS Spectr ။ 2007b; 12 (2 ပျော့ပျောင်း 3: 5-13 [။PubMed]
Holland, E, Wong က CM ။ 1995 ။ obsessive-compulsive spectrum ကိုမမှန် J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 56 (ပျော့ပျောင်း 43-6.6discussion 53-5 ။ [PubMed]
Homberg JR, Pattij T က, Janssen MC, Ronken အီး, De Boer SF, Schoffelmeer AN, et al ။ ကြွက်များတွင် serotonin Transporter ချို့တဲ့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုပေမယ့်အမူအကျင့်ကိုမပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007; 26: 2066-2073 ။ [PubMed]
Hornak J, O'Doherty J, Bramham J, Rolls ET, Morris RG, Bullock PR, et al ။ လူသားများအတွက် orbito-frontal သို့မဟုတ် dorsolateral prefrontal cortex တွင်ခွဲစိတ်ကုသမှုများအပြီးဆုလာဘ်နှင့်ပတ်သက်သောပြောင်းပြန်လေ့လာခြင်း J ကို Cogn Neurosci ။ 2004; 16: 463-478 ။ [PubMed]
Insel TR, obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် Pickar ဃ Naloxone အုပ်ချုပ်ရေး: နှစ်ခုဖြစ်ပွားအစီရင်ခံစာ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1983; 140: 1219-1220 ။ [PubMed]
Izquierdo တစ်ဦးက, Newman က TK, Higley JD, Murray EA ၏။ မျောက်တွေကိုအတွက်သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့် socioemotional အပြုအမူမျိုးဗီဇမော်ဂျူ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2007; 104: 14128-14133 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
obsessive compulsive ရောဂါယောလဃလက်ရှိတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ: အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 30: 374-388 ။ [PubMed]
Kolevzon တစ်ဦးက, Mathewson Ka, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတွက် Holland အီးရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitors: ထိရောက်မှုနှင့်သည်းခံစိတ်တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 67: 407-414 ။ [PubMed]
et al Krishnan-Sarin S က, Reynolds က B, Duhig လေး, စမစ်တစ်ဦးက, Liss T က, McFetridge တစ်ဦး။ အမူအကျင့် Impulse ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်များအတွက်ဆေးလိပ်သောက်ချုပ်ရာအစီအစဉ်တွင်ကုသမှုရလဒ်ကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2007; 88: 79-82 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lapiz-Bluhm MD, Soto-Pina AE, Hensler JG, Morilak DA ။ နာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအအေးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် serotonin လျော့ကျကြွက်အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုကို Set-ပြောင်းလဲစမ်းသပ်အတွက်သင်ယူမှုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်၏လိုငွေပြမှုသွေးဆောင်။ Psychopharmacology (Berl) 2009; 202: 329-341 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Li CS၊ Chang HL၊ Hsu YP၊ Wang HS၊ Ko NC ။ Tourette ရဲ့ရောဂါနှင့်အတူကလေးများမော်တာတုံ့ပြန်မှုတားစီး။ J ကို Neuropsychiatry Clin Neurosci ။ 2006; 18: 417-419 ။ [PubMed]
Lijffijt M က, Kenemans JL, Verbaten MN, ဗန် Engeland အိပ်ချ်အာရုံကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ရပ်တန်၏ Meta-သရုပ်ခွဲပြန်လည်သုံးသပ်: လစ်လပ် inhibitory မော်တာထိန်းချုပ်။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol ။ 2005; 114: 216-222 ။ [PubMed]
Lynd-Balta အီး, Haber SN ။ အဆိုပါမျောက်အတွက် ventral striatum မှ midbrain စီမံကိန်း၏အဖွဲ့အစည်းက။ neuroscience ။ 1994; 59: 609-623 ။ [PubMed]
Masaki: D, Yokoyama ကို C, Kinoshita S က, Tsuchida H ကို, Nakatomi Y ကို, Yoshimoto K သည်, et al ။ ကြွက်များတွင်သွားလာရင်း / အဘယ်သူမျှမ-go တာဝန်အတွက်သင်ယူမှု limbic နှင့် cortical 5-HT neurotransmission နှင့်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်အကြားဆက်ဆံရေးမျိုး။ Psychopharmacology (Berl) 2006; 189: 249-258 ။ [PubMed]
McElroy SL, နယ်လ်ဆင် eb, Welge ဂျာ ​​Kaehler L ကို, Keck PE, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှု Jr Olanzapine ။ အပျက်သဘောဆောင်သောကျပန်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 69: 433-440 ။ [PubMed]
McIntosh AR, Lobaugh NJ ။ application များနှင့်တိုးတက်မှု: neuroimaging အချက်အလက်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနည်းဆုံးရင်ပြင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Neuroimage ။ 2004; 23 (ပျော့ပျောင်း 1: S250-S263 [။PubMed]
Menzies L ကို, Achard S က, Chamberlain SR, Fineberg N ကို, ချန် CH, del Campos N ကို, et al ။ obsessive-compulsive ရောဂါ Neurocognitive endophenotypes ။ ဦးနှောက်။ 2007a; 130 (Pt 12: 3223-3236 [။PubMed]
Menzies L ကို, Chamberlain SR, Laird AR, Thelen သည် SM, Sahakian BJ, Bullmore ET ။ neuroimaging နှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ neuropsychological လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများပေါင်းစပ်: အဆိုပါ orbitofronto-striatal မော်ဒယ် revisited ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2008a; 32: 525-549 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Menzies L ကို, ဝီလျံ GB ကို, Chamberlain SR, Ooi ကို C, Fineberg N ကို, နို့စို့ J ကို, et al ။ obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်၎င်းတို့၏ပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်အတူလူနာအတွက်အဖြူရောင်ကိစ္စမူမမှန်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008b; 165: 1308-1315 ။ [PubMed]
Naqvi နယူးဟမ်းရှား, Rudrauf: D, Damasio H ကို, အ insula မှ Bechara အေပျက်စီးခြင်းစီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်ရန်စွဲ disrupts ။ သိပ္ပံ။ 2007; 315: 531-534 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ပန်းခြံ SB, Coull JT, McShane RH အ, Young က AH, Sahakian BJ, Robbins TW, et al ။ ပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် tryptophan လျော့ကျသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက်ရွေးချယ်ချို့ယွင်းထုတ်လုပ်သည်။ Neuropharmacology ။ 1994; 33: 575-588 ။ [PubMed]
Passetti က F, Dalley JW, Robbins TW ။ တစ်ဦးကြွက်ငါးရွေးချယ်မှုတုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်သုံးပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် serotonergic နှင့် dopaminergic ယန္တရားများ၏နှစ်ချက် dissociation ။ Psychopharmacology (Berl) 2003; 165: 136-145 ။ [PubMed]
Pizzagalli DA, အီဗင် AE, Schetter EC, ဖရန့် MJ, Pajtas PE, Santesso DL, et al ။ တစ်ဦး dopamine agonist ၏လူပျိုထိုးလူသားတွေအတွက်သင်ယူမှုအားဖြည့်ချို့ယွင်း: ဆုလာဘ်တုန့်ပြန်တဲ့ဓာတ်ခွဲခန်း-based အတိုင်းအတာထဲကနေအမူအကျင့်သက်သေအထောက်အထား။ Psychopharmacology (Berl) 2008; 196: 221-232 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါအတွက် Impulse နှင့် compulsive ။ ဗြာဇီယာ Psiquiatr ။ 2007a; 29: 105-106 ။ [PubMed]
Potenza MN ။ လုပ်ဖို့ပြုပါသို့မဟုတ်မယျသလော စွဲ, လှုံ့ဆျောမှု, Self-ထိန်းချုပ်မှုနှင့် Impulse ၏ရှုပ်ထွေး။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007b; 164: 4-6 ။ [PubMed]
et al Potenza MN, Leung HC, Blumberg HP က, Peterson BS, Fulbright RK, Lacadie CM ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက် ventromedial prefrontal cortical function ကိုတစ်ဦး FMRI Stroop တာဝန်လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003a; 160: 1990-1994 ။ [PubMed]
et al Potenza MN, Steinberg, MA, Skudlarski P ကို, Fulbright RK, Lacadie CM, Wilber MK ။ လောင်းကစားရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်တိုကျတှနျးထား: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003b; 60: 828-836 ။ [PubMed]
Poyurovsky M က, Faragian S က, Shabeta တစ်ဦးက, လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏ Kosov အေနှိုင်းယှဉ်, စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါနှင့်မပါဘဲဆယ်ကျော်သက် schizophrenia လူနာအတွက် Co-ရောဂါနှင့် pharmacotherapy ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2008; 159: 133-139 ။ [PubMed]
Reuter J ကို, Raedler T က, နှင်းဆီ M က, လက်, ငါ Glascher J ကို, Buchel C. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏လျှော့ချ activation ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 147-148 ။ [PubMed]
Robbins TW ။ အဆိုပါ 5-ရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်: အပြုအမူဆေးဝါးဗေဒနှင့် functional neurochemistry ။ Psychopharmacology (Berl) 2002; 163: 362-380 ။ [PubMed]
Robbins TW ။ ရွှေ့ပြောင်းနှင့်ရပ်တန့်: နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal အလွှာ, neurochemical မော်ဂျူနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2007; 362: 917-932 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရော်ဂျာက RD, Blackshaw AJ, Middleton HC, Matthews ကငွေကျပ်, Hawtin K ကို Crowley က C, et al ။ ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများ၏ monoaminergic အခြေခံများအတွက်ဂယက်: methylphenidate ကျန်းမာနုပျိုလူကြီးများအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုထိန်းချုပ် disrupts စဉ် tryptophan လျော့ကျလှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်သင်ယူမှုချို့ယွင်း။ Psychopharmacology (Berl) 1999a; 146: 482-491 ။ [PubMed]
ရော်ဂျာက RD, Everitt BJ, Baldacchino တစ်ဦးက, Blackshaw AJ, Swainson R ကို, Wynn K သည်, et al ။ နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများ, opiate ချိုးဖောက်မှုများ, prefrontal cortex မှ focal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူလူနာနဲ့ tryptophan-ကုန်ခမ်းပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သိမှတ်ခံစားမှုထဲမှာ Dissociable လိုငွေပြမှု: monoaminergic ယန္တရားများအဘို့သက်သေသာဓက။ Neuropsychopharmacology ။ 1999b; 20: 322-339 ။ [PubMed]
mesial prefrontal cortex အမှားထောက်လှမ်းတာဝန်ရှိသည်နေစဉ်ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ K ကို Smith က AB, Brammer MJ, တေလာအီးညာယုတ်ညံ့ prefrontal cortex တုံ့ပြန်မှုတားစီး mediates ။ Neuroimage ။ 2003; 20: 351-358 ။ [PubMed]
Schilman EA ၏, Uylings HB, Galis-de Graaf Y ကို, ယောလ: D, Groenewegen HJ ။ ကြွက်များတွင်အဆိုပါ Orbital cortex မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဟာ caudate-putamen ရှုပ်ထွေးသော၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းမှမှန်းချက်ရဲ့။ neuroscience လက်တ။ 2008; 432: 40-45 ။ [PubMed]
Schultz ဒဗလျူ dopamine နဲ့ဆုလာဘ်နှင့်အတူတရားဝင်ရယူခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002; 36: 241-263 ။ [PubMed]
Seymour B ကိုဒေါ် N ကဒါယန်း P ကို, အဆိုတော် T က, လူ့ striatum အတွက်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အကျိုးအမြတ်၏ Dolan R. Differential encoding က။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 4826-4831 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Stein DJ သမား, Chamberlain SR, အလေ့အထရောဂါ၏ Fineberg N. တစ်ခုက ABC ရုပ်သံမော်ဒယ်: ဆံပင်ဆွဲ, အရေပြား-Pick နှင့်အခြားကျပုံစံအခြေအနေများ။ CNS Spectr ။ 2006; 11: 824-827 ။ [PubMed]
Stein DJ သမား, Holland အီး obsessive-compulsive ရောင်စဉ်ပုံမမှန်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1995; 56: 265-266 ။ [PubMed]
Szeszko PR စနစ်, Ardekani BA, Ashtari M က, မဟော်ထ AK, ရော်ဘင်ဆင် DG, Bilder RM, et al ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက်အဖြူရောင်ကိစ္စမူမမှန်: တစ်ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 62: 782-790 ။ [PubMed]
Talbot PS, Watson ဟာ DR, Barrett SL, Cooper က SJ ။ Rapid tryptophan တွေပျက်စီးမှုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သင်ယူမှုသို့မဟုတ် set ပုံစံအပြောင်းအလဲလုပ်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲကျန်းကျန်းမာမာလူသားတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသိမှတ်ခံစားမှုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 1519-1525 ။ [PubMed]
Tsaltas အီး, Kontis: D, Chrysikakou S က, Giannou H ကို, Biba တစ်ဦးက, Pallidi S က, et al ။ 5-HT2C ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် OCD pathophysiology အတွက် 5-HT1D အဲဒီ receptor ပါဝင်ပတ်သက်မှု: obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အဖြစ်အားဖြည့် Spatial Alternative ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 57: 1176-1185 ။ [PubMed]
ဗန် der Plasse, G, Feenstra MG ။ serial မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သင်ယူမှုနှင့်စူးရှ tryptophan ကွယ်ပျောက်သွားစေ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2008; 186: 23-31 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ ။ လူသားတွေအတွက်ကင်းအားဖြည့်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ် imaging လေ့လာမှုများ။ J ကို Psychopharmacol ။ 1999; 13: 337-345 ။ [PubMed]
Walker က SC, Robbins TW, Roberts သည် AC အ။ အဆိုပါ marmoset အတွက် orbitofrontal cortex function ကိုမှ dopamine နှင့် serotonin ၏ differential ပံ့ပိုးမှုများကို။ Cereb Cortex ။ 2009; 19: 889-898 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Watkins LH, Sahakian BJ, Robertson MM, Veale DM, Rogers RD, Pickard KM, et al ။ Tourette ၏ရောဂါနှင့် obsessive-compulsive ရောဂါအတွက်အလုပ်အမှုဆောင် function ကို။ Psychol Med ။ 2005; 35: 571-582 ။ [PubMed]
Westenberg HG, Fineberg NA, obsessive-compulsive ရောဂါ Denis D. Neurobiology: serotonin နဲ့ကျော်လွန်ပြီး။ CNS Spectr ။ 2007; 12 (2 ပျော့ပျောင်း 3: 14-27 [။PubMed]
Winstanley, CA, Chudasama Y ကို, Dalley JW, Theobald DE, Glennon JC, Robbins TW ။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် prefrontal 8-Oh-DPAT နှင့် M100907 visuospatial အာရုံကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်ငါးရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်အပေါ် Impulse လျော့ကျသွားသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2003; 167: 304-314 ။ [PubMed]
Winstanley, CA, လင်းယုန် DM, Robbins TW ။ ADHD စပ်လျဉ်း Impulse ၏အမူအကျင့်မော်ဒယ်များ: လက်တွေ့နှင့် preclinical လေ့လာမှုများအကြားဘာသာပြန်ချက်။ Clin Psychol ဗျာ 2006; 26: 379-395 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Winstanley, CA, Theobald DE, Dalley JW, Glennon JC, Robbins TW ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 5-HT ကွယ်ပျောက်သွားစေနှင့်အတူအပြန်အလှန်: 2-HT5A နှင့် 2-HT5C အဲဒီ receptor ရန် Impulse တစ်အတိုင်းအတာအပေါ်ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2004; 176: 376-385 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry: unsensed မက်လုံးပေးကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002; 36: 229-240 ။ [PubMed]
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ။ ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး, 10th ထုတ်ဝေ (ICD-10) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO, ဂျနီဗာ; 1992 ။
Yucel M က, Harrison BJ, et al Wood က SJ, Fornito တစ်ဦးက, Wellard RM, Pujol J ကို။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် medial တိုကျရိုကျ cortex ၏ functional နှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးပွောငျးလဲ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 64: 946-955 ။ [PubMed]
Zack M က, Poulos CX ။ တစ်ဦးက D2 ရန်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲ၏အကြိုးနှင့် priming သက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32: 1678-1686 ။ [PubMed]
ဇောဂျေ, Insel TR, အမျိုးသား, ဇော-Kadouch RC, ဟေးလ် JL, Murphy က DL ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် Serotonergic Response ။ နာတာရှည် clomipramine ကုသမှုဆိုးကျိုးများ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1988; 45: 167-172 ။ [PubMed]